E. Grating Services and Specification: Order the design, manufacture, installation, test the strength – chemicals. – ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ
กรกฎาคม 26, 2017 สิงหาคม 17, 2017 by admin
Designing Space between Grating and L-AngleHow to measure the width of your grate? Grating
Ex-2 กรณีใช้ตะแกรง กว้าง 30cm. จะต้องเตรียมบ่ารับเผื่อไว้ = 30.5-31.0 cm.How to installadrainage grid Should be designed to provideawide and high fit to the grate plate. For strength and safety of use. The installation of the drainage grille must be designed to provideawide and high support for the grate plate. By common standards Steel and plastic grids are available in two sizes, width 25cm and 30cm. Therefore, the grille (L-shape) must be placed before laying concrete. Withaheight of 25-30mm (depending on the type of grate), so that the grille always fit to the ground. Do not stumble atawheelchair or walk through. The width of the shoulder when measured should be left for 5-10mm.
The width of the shoulder to get the grating. Will be added to each side 3-5mm.2side is 6-10mm.
The Ex-1 if the grid width 25cm. To be prepared should get for it = 25.5-26.0 Cm.
The Ex-2 in the sieve width 30cm.
Design table, check the cutting order, close the edges fit. Grating Fiber FRP Grating Cutting Design for 4-Sides-Close-End
แผ่นใหญ่มาตรฐาน 1.5×4 เมตร หลังการตัดถ้าไม่ออกแบบให้พอดีจะทำให้เกิดเป็นรอยแง่งที่ไม่ลงตัว ลักษณะเหมือนการเปิดขอบ ดังนั้นถ้าหากต้องการให้ปิดขอบพอดี จำเป็นต้องเปรียบเทียบกับตารางการปิดขอบก่อนสั่งตัด
FRP grating can be cut to any size. From the large standard 1.5×4 meters after cutting, if not designed to causeafractious irritation. Looks like opening the edge. So if you want to close the edges properly. Need to compare with the cutting table before cutting.
***** More information please contact us.
How to cut grating grating fiberglass / Frp Grating Cutting Method YouTube-VDO
FRP Grating Cutting Cutting Method by Fiber Cutter # 1
FRP Grating Cutting Method Cut by circular saw using diamond cutter # 2
FRP Grating Measuring Process How to Measure Workpiece and Cutting # 3
FRP FibreGlass Grating Test Certificates test the strength of chemical resistant fiber glass mesh reinforcement
ความสามารถในการรับน้ำหนักของตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสFiberGlass Grating Loading Data Sheet
The fiberglass grating capacity
***** The strength of the fiberglass grating depends on: 1) The width of the grate is wider, the less the force. 2) Thickness of grate plate Choosingathicker sieve can bealot harder. 3) the form of pressure Isaweight distribution orasingle point press. For more information, please contact us.
ตารางแสดงสารเคมีที่ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส สามารถทนการกัดกร่อนFRP Molded Grating Chemical Resistance Guide
Table of chemical fiber glass mesh. Can withstand corrosion
***** Corrosion-resistant chemicals in the table shown below are only some of the other chemicals. Please ask for more information directly from the company.
Manhole Cover Test Cerificate
ผลการทดสอบฝาบ่อปิดครอบท่อพักระบบบำบัดน้ำเสียManhole Cover Test Cerificate Test
Results Cover Cover Cover Hose Wastewater Treatment System
Material FRP FibreGlass Comparison Material Fiberglass Material Cast iron, sticky plastic
Manhole cover Manhole Cover with Frame Installation Method
Manhole Cover || Covered closed pond cover for waste water treatment Cast iron ฝาท่อไฟเบอร์กล๊าส
8. Ductile Cast Iron Manhole Cover (Round/Square) ฝา Close the cover manholes, pipes, ductile cast iron water treatment system
IChancon GFRP Composite Steel Gully Scupper Driveway Grating Grilles, Culvert Conduit Trench Drainage Ditch, Cast Ductile Iron Manhole Grid Covers Catch Basins, Safety Expanded Metal Grating, Heavy duty Grip Strut Channel, Perforated Air Flow Aluminum Grilles, Raised Access Floor Walkway Pavement, Yard Ramp Edging Pedestal, Carbon Serrated Bar Steel, Bar Grate Mounting Saddle Clip Lock Clamp Fastener Anchor Wing Nut, ductile cast iron drain hose,, fiberglass resin duct cover, manhole cover, Manhole Holder cover, drain cover, drainage hose, sheet Information Raceway Rectangular tube cover, concrete cover, reinforced cement, cover, treatment system, garbage collection, immediate cutting; Grating, Grating, Steel grille, prefabricated grate, grate frame around the base of the tree, nose sheet, corner, eyebrow, cover, anti-slip stairs, bar stools, drainage pipes, Y meter, Yama, With frame, drainage, steel wire tear, staple hole, carbon fiber stretch, chicken finishing, rain drainage, anti-slip stairs, rails, Street outside, decorated Koi, landscape, tile, flooring and upgraded equipment, DIY easy to install yourself, floating grille mounted lamps, ceiling T-bar, ceiling tile onawall, the wall of light gauzy curtains opaque. Fence panel partition partitions. Decorative multi-purpose canopy blinds, hinges, fences, wind chimes, bird protection netting, squirrels, squirrels, squirrels, Delight, polycarbonate, vinyl, office block, office, bathroom, decorative ceiling, air conditioning system, room blocks, high quality grade A Beautiful design, double building, Ventilation grilles suspended ceiling textures, Splashboard / Weatherboard / Slat blinds / Trellis shade, Awning Wall Panels, Colorful General Sun Screen Partition, Anti-Bird Control Netting, Mini Decorative Grating Curtains, Sculpture Supermarket, school, corridor, toilet, hospital, re-decoration works, ceiling panels, curtain wall Fence rail partition partition Roof canopy Hinges, hinges, curtain wall, slats, blinds, blinds, blinds, light curtains The sieve grate comb separates the waste debris floating into the drain at the foot of the footpath. Trap dust, sludge, food waste, paper leaves, stone rods, grate boxes, water intake The sidewalk, the side of the footpath, standard specification of the municipality. Department of Public Works and Town and Country Planning Department of Rural Roads National Housing Authority Expressway Authority of Thailand, Trench basin scupper Dust screen driveway side drainage grating traffic roadway, Leaf trapper safe scupper drainage traffic grates along the highway Professional plastic sheeting, Outer wall cover, paving, walkway Footrests, paving, cargo support from conveyor belt, folk elevators and gardens. The electric field, the stage, the contest, the grass block, the decorative panel, the outer wall, the ceiling, the wall, the eaves, the gable, the gable, the staircase, the room, the room, the room and the stencil. Plated plastic wire Variety of designs to choose from. They can be trimmed and decorated in addition to stained-glass furniture, stucco walls, decorative elements, beautiful and unique locations. Aluminum Composite, Composite, FRP, corrosion, rust, heat, fire, acid, alkali, chemical, energy-saving, eddy-free, no toxic, no fire, Fiberglass, Strongwell, Webforge, floor repair, surface coating, epoxy, epoxy, epoxy, epoxy floor, po Poly urethane, pvc, glue, bio, bio, pu concrete, coating, stone hard, PE industrial floor improvement, hotel kitchen, chemical resistant coating, acrylic, repair leakage crack Sealing, coating, waterproofing deck, chemical pits, fiberglass gutters, metal sheet roofs, substitute materials Stone, synthetic wood, synthetic plastics, wpc, plastics, bio, recycled, accessories, florida, rufrid, flooring, cushion, cushion overflow pool, Louver, rubber slabs around the machine platform, pallet trays shelves, flooring house, block worm blocks, road paving decorate the lawn floor. GFRP Composite Diamond Top Manhole Covers Checker Plate Surface Type cut to size immediately) www.chancon Light barrier Aquarium Decoration Equipment EggCrate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Screen Filter Media Diffusers Panel, DIY Abstract Plastic material board Pond Marine Aquarium, HVAC air acrylic return / Double deflection Grid Louver, terrarium vivarium used to createagrid panel to block the filter light. From LED / fluorescent tube (Led / Fluorescent) Panel Panel Ceiling Wall Curtain Blinds Screen Louvers, ventilation holes Cover covers the electrical system, building decoration. Light panel, decorative light, showcase Used to replace aluminum ceiling ventilation. Used asadecoration for beautiful fish. FRP Products, GFRPS, Glass Fiber Reinforced Rebar, Reinforced Fiberglass slab, Composite building materials, vinyl ester resin, Resistant to most chemicals • Highly resistant to heat and electricity • Highly resistant to heat, insulated • Gives added fire retardant protection to cables in case of external fire Self extinguishable) CHANCON PROFILE Drainage grate system Slabs, walkways, ramps, traps, traps along the sidewalk. Step ladder Lightweight flooring Lids wash Pipe cover Floor slab in multipurpose yard Paving mat The upper passage of the wastewater treatment system prevents erosion from both rust and chemicals. Type of Grate and Grating Specialist / Grating Specialist (5 grate,2lids) 1. PP / ABS Swimming pool overflow GRATING Overflow Pool Grate Plastic PP / ABS plastic grids are available in2standard sizes, 25cm wide and 30cm wide. There are2quality grades to choose from, light weight, not rust, but with minimal force. If the sun is long. There will beabroken frame. Cheapest price Suitable for indoor use. Around the pool The area without cars running through the dual axis can be used with oval curve shape. 2. PVC / PP / PE Plastic GRATING. PVC / PP / PE plastic grille with2sizes 25x100cm. And 30x100cm. Lightweight, strong force to pass through. If sun or chemical exposure often. There may beacracking problem. Cheaper than steel Suitable for use in the shade, gardening, walkways, fish ponds, condominiums, condominiums around the factory. 3. HDG. STEEL GRATING Galvanized steel grating Hot Dip Galvanized Hot dipped galvanized steel plate. Combined with the CO2 Robot system, the steel is melted together, welding hands and then plated HDG. The advantage is that it is stronger than all materials. The disadvantage is rust. FRP Fiberglass Grilles / GRATING Fiberglass reinforced fiberglass reinforced resin “FRP grille” replacement for stainless steel / aluminum sieve. Made from high strength resin fibers, lightweight, resistant to chemicals, not rusty, UV resistant, sunlight does not ripen. Thief does not want Easy maintenance The life of 50-100 years isanew alternative material. Choose the right color for your needs. Large 1.5x4M standard sheet for flooring. Or can be ordered in all sizes as customers need 3-5 years warranty. 5. Ductile Side Drain Grating Made of Casting Ductile Iron, designed to be used. Grate traps, trash separators, traps, leaves, stones, sidewalks. According to municipal standards Department of Public Works and Town and Country Planning Ductile Cast Iron Manhole Cover Ductile Cast Iron Manhole Cover Ductile Cast Iron Manhole Cover Ductile Cast Iron Manhole Cover Ductile Cast Iron Manhole Cover Ductile Cast Iron Manhole Cover Manufactured from Ductile Cast Iron manufactured in accordance with EN124, tested by Thai Institute of Quality Assurance Choose fromavariety of grades from 2-40 tons, both with hinges and anti-theft lock. Easy to install and maintain. Selling price includes 1 set with frame and7frames. FRP Manhole Cover reinforced fiber reinforced concrete pockets with frame Made from reinforced fiber reinforced FRP material, EN124 is not rusty likeasticky cast iron. Choose from 2-40 tons, beautiful to nature. Not popular in the market to buy antiques are stolen 8. Screen Partition Panels Anti-Bird Netting Curtain Wall Curtain Partition partition Awning lattice lattice Manufactured and designed by professional architects. For office decoration, warehouse, factory building, architectural design odor. Not monotonous Used for dividing the space into two parts to enhance the value of housing in both the interior and exterior, resistant to the sun, light rain, use sunshade to replace the lattice work GRP / FRP / Fiberglass / Composite for grating and Manhole Covers new materials. The process of fiber reinforced fiber resin is lightweight, the strength is higher than that of cast iron, not corrosion, not corrosion. The thief does not want to cover it well. Choose the right color for your surface. .vs. Steel .vs. Plastic (PE / ABS / PVC) 1. Non-corrosive, non-corrosive, non-cracking, heat-resistant and UV resistant to corrosion from chemicals such as: Caustic soda, Borax, The sulfuric acid, etc., can detect the temperature and chemical resistance of the test table. 2. The life of the product for more than 50 years depends on the nature of the application, such as the frequency of contact with chemicals near the sea or in use. High temperature (How to solve rust, corrosion, corrosion, steel Effectively) 3. Factory value added Can choose colors to match the environment. Insulating Material: Insulated, non-conductive, non-reflective material such as yellow, blue, gray, black and green. Electric shock absorbers. 4. Lighter weight than steel. But as high as steel. It makes moving, installing and maintenance faster and easier. 5. Price is close to cast iron. Higher than galvanized steel, but FRP has no problems stolen. Due to the sale is not in the market to buy anti-rust is not broken from the sun UV radiation sticky likealightweight steel cut into shape. Fiber texture is high resolution. Close tight As with the rubber seal. Good smell protection No problem bend Quiet when the car runs through the surface. Insulated (non-conductive), heat resistant and UV-free, unbreakable like ABS plastic, PVC, poly sheet. 8. Imported from Europe, America, the quality is accepted in the international market standard EN124 with 3-5 years quality guarantee. Stay with model and model CHANON manufactures and sells FRP Grating, drainage grids, gratings, and gratings. walk Especially FRP material to replace metal, stainless steel, aluminum, brass, copper, cast iron, galvanized steel, zinc plating, galvanizing for construction cold rooms, livestock stalls, poultry farms, bird cages. Dog, tunnel, Dam dock, river bridge, elevated highway, Department of Rural Roads, Expressway, Electricity, Telephone Organization Three-dimensional structure, cliff wall, mountain airfield, high-rise building, architecture, large construction, Cable laying in chemical and purification plants, Refineries, offshore plants, Oil & Gas sector, Tunnels Head office | Agent, Distributor CHANCON COMPANY LIMITED www.chancon.co.th || GratingThai Co., Ltd. www.GratingThai.co.th (Opposite Central Rama 2) 199 Soi Tha Kham 21/1 Samae Dam, Bang Khun Thian Bangkok Thailand Thailand #Mobile (Sales): 081 932 7894, 061 647 0184-6 Tel: 02 451 0780-1, Fax: 02 451 0786 Email: mkt@chancon.co.th Line (iD): iCHANCON Website Grating Know-How: http://GratingThai.com, http: // Fiberglass Grate – Www.facebook.com/GratingThai, www.facebook.com/FrpFiberGrating.chancon, www.facebook.com/FrpGrating.ManholeCover Youtube: http://www.youtube.com/mktchancon, http://www.youtube.com / FRPGratingFiberglass, http://www.youtube.com/FRPGratingManhole |Twitter: https://twitter.com/GratingThai https://plus.google.com/+ChanconTh Our molded fiberglass grating and pultruded fiberglass grating provide unmatched corrosion resistance properties, especially when compared to steel flooring products. Strength, long life and safety are also superior qualities of our fiberglass grating products, and their electrically non-conductive properties make them the ideal option for floor grating. We offer many types of fiberglass grating for all your different applications. Fiberglass grating applications range from architectural sun screening and fiberglass flooring to standard walkways and high load rolling applications. Grit surfaces and standard stock colors or custom colors are provided to suit your fiberglass application. Choose from our custom resin types forafiberglass flooring product that is tailored to suit your corrosion resistance needs.
Fiberglass Structural Shapes Our fiberglass structural shapes and pultruded fiberglass profiles are made fromacombination of fiberglass and thermosetting resin systems. All shapes are lightweight, impact resistant, low maintenance, non-magnetic, low conductive and have dimensional stability, making them easy to install and ideal for several applications. Custom shapes are available upon request.Composite (GFRP) Gratings : What is GFRP (Glass Fiber Reinforced Plastic)? GFRP isacomposite material made ofapolymer matrix reinforced with fiber, aiming to form better physical and chemical properties. GFRP isaproduction material such as metal, wood, glass, concrete. GFRP materials has important advantages as against other production materials, new features can be acquired according to requirements. What is GFRP Grating? Molded GFRP gratings are produced in special molds with wet lamination process, consist of glass fiber, resin, additives and pigment. After these raw materials harden, GFRP gratings are pressed out of the mold. Molded GFRP gratings are light, anti-corrosive, have high chemical and physical resistances and electrically non-conductive. Components: Resin, glass fiber, additives and pigment are the basic components of the GFRP materials. It can be produced any material which are proper for the requirements by changing these components. Resin: Chemical resistance, flexibility and UV resistance of the GFRP gratings are determined by the resin. Resins are chose according to the environment; orthophthalic resin for general usage, isophthalic resin for chemical environment and vinyl ester resin for extremely heavy chemical environment. Glass Fiber: Multi-layered continuous glass fibers are used in production. Molded GFRP gratings have high mechanical resistance due to glass fiber. Additives: Additives such as UV stabilizers, flame retardants and low smoke density retardants increase mechanical and chemical resistance and add new superior features. Pigment: Pigments make it possible to give the GFRP gratings any color. This makes it happen to use GFRP gratings in architectural projects.Molded Grating Pedestals Fibergrate Adjustable Grating Pedestals are high quality components designed to support elevated grating applications. Infinitely adjustable within their specified range, standard pedestals raise grating platforms and custom pedestals with cross bracing can raise floors above the base elevation. Pedestals are available for 1″, 1-1/2″ and 2″ deep square mesh Fibergrate or Chemgrate molded fiberglass gratings. Pedestal heads are stocked in “single head” and “quad head” designs facilitating quick, safe and economical installation of elevated platforms. • ADJUSTABLE – Create level walking surfaces on sloping floors • VERSATILE – Available for all Fibergrate and Chemgrate square mesh gratings • COST EFFECTIVE – Low installation cost, easily relocated to other areas • LIGHTWEIGHT – Modular, adjustable components are lightweight and reduce lifting • CORROSION RESISTANT – Thermoplastic polyester and pultruded vinyl ester are resistant to most industrial wet-floor applications
FRP fiberglass Services Grating ແລະຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ (Chemical Resitance, Load ຄວາມສາມາດ, ການຕັດ Method)
ໄລຍະທີ I ຂອງ grill ໄດ້ຄວນຈະເປັນ – ການສັ່ງປິດແຂບໄດ້ – ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າການຕັດ – ທົດສອບຄວາມເຂັ້ມແຂງ. ຕາຕະລາງຂອງການຕໍ່ຕ້ານສານເຄມີ ຂອງຕາຫນ່າງເສັ້ນໃຍແກ້ວ
ດົນປານໃດສໍາລັບ width ຂອງ pads ບ່າໄດ້ຮັບ grating Grating
ອອກແບບຊ່ອງລະຫວ່າງ Grating ແລະນ້ໍາມຸມການ.ວິທີການຕິດຕັ້ງໄດ້ຮູ້ບຸນຄຸນລະບາຍ. ການອອກແບບຄວນຈະໄດ້ຮັບການກະກຽມເພື່ອລວງກວ້າງບ່າ, width ແລະເຫມາະປີ້ງແຜ່ນ. ສໍາລັບຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມປອດໄພຂອງການນໍາໃຊ້. ການຕິດຕັ້ງກະຕັນຍູລະບາຍອອກແບບມາເພື່ອຮັບການກະກຽມຢ່າງເຕັມສ່ວນກັບລວງກວ້າງບ່າ, width ແລະເຫມາະແຜ່ນລະບາຍຄວາມກະຕັນຍູ. ມາດຕະຖານທົ່ວໄປ ເຫຼັກແລະຢາງສອງຂະຫນາດຄວາມກວ້າງກວ້າງ 25cm. ແລະ 30cm. ບ້າດັ່ງນັ້ນ, ໄດ້ຮັບການ grill (L) ຈະໄດ້ຖືກບັນຈຸເຂົ້າໄປໃນເຫຼັກກ່ອນທີ່ຈະ pouring ສີມັງ,. ອອກຈາກລະດັບຄວາມສູງຂອງ 25-30mm ເປັນ. (ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດຂອງ grill) ເພື່ອເຮັດໃຫ້ grill ໄດ້ໃຫ້ພໍດີໃຫ້ລ້າງອອກດ້ວຍພື້ນເຮືອນ. ລົດເຂັນຄົນພິການໃຊ້ເວລາບໍ່ຂາດສາຍຫຼືຍ່າງຜ່ານ. ຄວາມກວ້າງຂອງບ່າໄດ້ໃນເວລາທີ່ການວັດແທກຕ້ອງໄດ້ຮັບການໃຫ້ສໍາລັບ 5-10mm. The
width ຂອງ pads ບ່າໄດ້ຮັບການຮູ້ບຸນຄຸນ. ຈະໄດ້ຮັບການເພີ່ມເຂົ້າໄປໃນແຕ່ລະ 3-5mm ຂ້າງ.2ເປັນ 6-10mm ຂ້າງ.
The Ex-1 ຖ້າຕາຂ່າຍໄຟຟ້າກວ້າງ 25cm. ສະນັ້ນຈະໄດ້ກະກຽມເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບທີ່ນັ່ງຊົມ 25.5-26.0 =.
The Ex-2 ໃນ 30 ຊົມ width sieve. ໄປ. ໄດ້ຮັບການກະກຽມສໍາລັບນ້ໍາທ່າ = 30.5-31.0 cm.
ຕາຕະລາງແມ່ນອອກແບບມາເພື່ອຕັດສິນກໍານົດຂອບຕັດສິນ. Glass Fiber Grating FRP Grating ຕັດອອກແບບສໍາລັບການ4ດ້ານ, ປິດ-End.
FRP ຮູ້ບຸນຄຸນສາມາດຕັດຢູ່ຂະຫນາດໃດ. ແຜ່ນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງມາດຕະຖານແມັດ 1.5×4 ຫຼັງຈາກທີ່ຕັດໃຫ້ພໍດີຖ້າຫາກວ່າບໍ່ໄດ້ອອກແບບການເຮັດໃຫ້ເກີດ crack ລໍາ irrational. ເບິ່ງຄືວ່າເປັນຂອບເປີດ ດັ່ງນັ້ນຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະປິດການໃຊ້ງານແຂບໄດ້. ຕາຕະລາງປຽບທຽບກັບການປິດຂອງຄໍາສັ່ງທໍາອິດໄດ້.
ສາມາດໃຊ້ໄດ້ບໍ່ມີການກູ້ຄືນມູນຄ່າ 1 .: ຈະແກ້ໄຂມັນ JobsDB.com ລັກບໍ່ມີບັນຫາຢ່າງລະອຽດເນື່ອງຈາກວ່າມູນຄ່າສໍາລັບ recycle ທີ່ໃຊ້ເສື້ອຜ້າຄົນດີແລະ Corrosion Resistance ເປັນ: ມັນຈະ JobsDB.com ບໍ່ເຄີຍເຮັດແນວໃດມັນເຮັດສະຫນິມເນື່ອງຈາກວ່າມີພັຍດີແລະ Corrosion Resistance
4. ເປັນ Design- Free: ມັນ JobsDB.com ສາມາດອີງຕາມການຜູ້ໃຊ້ອອກແບບໄດ້ເວົ້າວ່າຄວາມຕ້ອງການຂອງ. .including ສີ, ຜົນຜະລິດຮູບແບບ, ໂດຍສະເພາະມີບໍ່ໃດໂຕ້ຖຽງ: ເປັນທັງຫລືຟື້ນຄືນມາໃນເວລາທີ່ flowerpotThere Pass Through ລົດ
5. ແລະ Made ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າສໍາລັບຂະຫນາດໃດ Logo ຂອງທ່ານເອງໄດ້ມີທາງເລືອກການແຂ່ງຂັນໃນລາຄາໄປປຽບທຽບທາດເຫຼັກໃນຖານະເປັນມາດຕະຖານ, ການວັດສະດຸ ductile.
# grating ເຫຼັກ grating ໃຍແກ້ວ, overflow sewer ຢາງຢູ່ອ້ອມຂອບຂອງສະນຸກເກີທີ່ສໍາເລັດ, manholes # ປົກຫຸ້ມຂອງ, ແມ່ພິມສໍາລັບການປົກຫຸ້ມຂອງທາດເຫຼັກ, sewer, # FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic ແຂງຮູ້ບຸນຄຸນ, # ຫນຽວ, ສຽງໂຫວດທັງຫມົດທາດເຫຼັກ manhole. COVER, #Swimming Overflow ບາຍນ້ໍາ Gully Gutter ຮູ້ບຸນຄຸນ, #Saddle Clip Clamp Lock Fastener, # Egg Crate ປີ້ງແຜ່ກະຈາຍ Divider ໄຟຕູ້ປາ Panel, #Tree Guard ຄວາມປອດໄພ grating, # sieve ຈັ່ນຈັບ debris, ຂີ້ເຫຍື້ອຝັງໃນວິຖີຊີມັງ. •ຊັບພະ, #. ກອບປີ້ງປົກປ້ອງພື້ນຖານຂອງຕົ້ນໄມ້ດັ່ງກ່າວ ຊັ້ນ Mat walkway ມ່ານ # ຄະນະກໍາມະ slatted ປີ້ງຜ້າອັດດັງຕັນອຸປະສັກແສງສະກັດແສງສະຫວ່າງ, # ປົກຂອບດັງ ladders ກະດານການປົກຫຸ້ມຂອງ trim ລື່ນຄລິບ # ລັອກເລືອກຍຶດແຜ່ນ sieve.
www.CHANCON.co.th Tel: 02 4510780-1 #Grating ຊ່ຽວຊານຊ່ຽວຊານ: 081 9327894 Line iD: iChancon GFRP Composite Steel Gully Scupper ຖະຫນົນລົດແລ່ນຕະແກງຍ່າງ, Culvert Conduit Trench ບາຍນ້ໍາ Ditch, ສຽງໂຫວດທັງຫມົດທາດເຫຼັກຫນຽວ Manhole Grid ປົກອ່າງຈັບ, ຄວາມປອດໄພຂະຫຍາຍ ໂລຫະ Grating, ຫນັກຍົກເວັ້ນພາສີ Grip ບາຍ Channel, ລະນຶກແບບປຸແອອາລູມິນຽມການໄຫຼ, ຍົກ Access Floor ທາງຍ່າງທາງຕີນ, ເດີ່ນ Ramp Edging Pedestal, Carbon ບາເປັນແສກແຂ້ວເລື່ອຍ Steel, ພາທະນາຍຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນການຕິດຕັ້ງ Saddle Clip Lock Clamp Fastener Anchor ตัวล็อคเหล็กยึดแผงตะแกรง, formwork ຜູກຄັນ Wing ຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງ, ฝาท่อระบายน้ำเหล็กหล่อเหนียว,, ฝาท่อไฟเบอร์ผสมเรซิ่น, ฝาเปิดปิดถังแมนโฮลแฮ นโฮล , ฝาปิดครอบท่อบ่อพักกรองเกรอะ, ฝาปิดท่อระบายน้ำเสียน้ำดี, แผ่น ูร่องน้ำฝาปิดท่อทรงกลม – สี่เหลี่ยม, ฝาปิดคอนกรีตปูนซีเมนต์เสริมเหล็ก, ฝาปิดงานระบบบำบัดรวบรวมน้ำเสีย ทิ้งชนิดสั่งตัดได้ทันที ; ເກິດຕິ້ງ, ເກິດຕິ້ງ, ຝາຕະແກງເຫລໍກແຜ່ນເຊື່ອມສໍາເລັດຮູບ, ກອບຕະແກງປົກປ້ອງຮອບໂຄນຕົ້ນໄມ້, ແຜ່ນປິດຈະຫມູກຂອບມຸມຄິ້ວແຜງຄອບບັນໄດກັນລື່ນຖະຫນົນຍ່າງແທ່ງຕົວຍູລະບາຍນ້ໍາທິ້ງຮິມຂອບຟຸດບາດ, ວາຍເມດ, ວາຍເມຊະ, ໄວເມຊະ, ພ້ອມເຟມ, ຊ່ອງລະບາຍນ້ໍາ, ລວດເຫລໍກສວກພັບສະຫລຸເຈາະຮູ, ເຫລໍກຍືດຄາບອນໄຟເບີ, ລາຍຕີນເປັດໄກ່, ຮາງລະບາຍນ້ໍາຝົນ, ຂັ້ນບັນໄດກັນລື່ນ, ຮາວກັນຕົກ, ມິນິຕະ ຂັບກັນກິ່ນ, ບ໊ອກປູຖະ ນົນພາຍນອກ, ຕົກແຕ່ງບໍ່ປາຄາຟ, ພູມິທັດ, ກະເບື້ອງ, ປູພື້ນເຄື່ອງຈັກຍົກລະດັບ, DIY ຕິດຕັ້ງງ່າຍດ້ວຍຕົວເອງ, ໂຄມຕິດລອຍຕະແກງຝັງຝ້າທີບາ, ແຜ່ນຝ້າເພດານແບບກ່ຽວແຂວນ, ສາກຝາຜະຫນັງເບົາມ່ານ ໂປ່ງທຶບແສງຮົ້ວແຜງພາທິຊັ່ນກັ້ນຫ້ອງຝ້າຕົກແຕ່ງເອນົກປະສົງກັນສາດບັງຕາລະແນງພັບປັນເຟີ໋ຍມະຊຸ້ມໄມ້ເລື້ອຍຮັບລົມ, ຕາຂ່າຍປ້ອງກັນຄຸມນົກ, ແຜ່ນກັ້ນຂັບໄລ່ນົກງູກະຮອກ, ແຜງແບ່ງກັ້ນສັ່ງປະກອບ ໄລ, ຄະລິກເນນໄວນິນ, ກັ້ນອອຟຟິດສໍານັກວຽກຫ້ອງນ້ໍາ, ຝ້າຕົກແຕ່ງປິດວຽກລະບົບແອສາຍໄຟ, ກັ້ນຫ້ອງ, ຄຸນະພາບສູງເກດເອດີໄຊສວຍຫລູຄູ່ອາຄານ, Ventilation grilles suspended ceiling textures, Splashboard / Weatherboard / Slat blinds / Trellis shade, ແຜ່ກະຈົກຝາ, ແຜ່ກະຈາຍຫນ້າຈໍທີ່ມີສີສັນທົ່ວໄປ, ການຄວບຄຸມນົກຕ້ານການຄວບຄຸມນົກ, ມ່ານມ້ວນມ່ານມ້ວນມ້ວນມ້ວນມ້ວນ, ຫ້ອງການຫ້ອງການ, ຫ້ອງການ, ໂຮງງານ, ໂຮງຮຽນ, -decoration works, ສາກແຜ່ນຝ້າເພດານຜະຫນັງມ່ານຮົ້ວຮາວແຜງກັ້ນພາທິຊັ່ນຫລັງຄາກັນສາດລະແນງຕາຕາຕະຂ່າຍບານພັບເຟ ້ຍຊຸ້ມໄມ້ເລື້ອຍກໍາແພງ, ແຜງລະແນງຕາຕາຫນ້າກາກຕຶກຕະແກງປັ້ນຊ່ອງແສງບັງກະລາຝ້າຍຕະແກງຫວີດັກແຍກເສດຂະຫຍະຍ່ຽວໃສ່ຊ່ອງລະບາຍນ້ໍາກົງຂອບຟຸດບາດດັກຝຸ່ນຜົງຕະກອນຂະຫຍະອາຫານອາຫານໃບໄມ້ກະດາດຄັນຫິນກ່ອງຊ່ອງຕະແກງຮັບນ້ໍາຮາງ ยูด้านข้างริมฟุตบาท, สเปคตามมาตรฐานของเทศบาลกรม โยธาธิการและผังเมืองกรมทางหลวงชนบทการเคหะแห่งชาติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย , ນ້ໍນ້ໍາ scupper ຫນ້າຈໍຂີ້ຝຸ່ນຖະຫນົນດ້ານການລະບາຍການຈະລາຈອນ grating ຖະຫນົນຫົນທາງຖະຫນົນ, ຂີ້ເຫຍື້ອໃບໄມ້ທີ່ປອດໄພ scupper ລະບົບການຈະລາຈອນລະບາຍຕາມແຄມທາງດ່ວນຜູ້ຊ່ຽວຊານແຜ່ນພາດສະຕິກຮອງພື້ນປູຮ່ອງນ້ໍາແທນເຫລໍກ, PP PVC PE ABS Swimming Plastic Grating, ທົດແທນແຜງກັ້ນກະຈົກຫນ້າກາກຮ້ານຕຶກອາຄານ, ຫຸ້ມຜະຫນັງພາຍນອກ, ແຜ່ນປູພື້ນທາງຍ່າງໄຫລ່ ຕີນ, ປູຮອງຮັບສິນຄ້າຈາກສາຍພານລໍາລຽງ, ຍົກລະດັບພື້ນບ້ານແລະສວນເຂດອະນາໄມກັນໄຟຟ້າສະຫນາມເວທີສະແດງປະກວດ, ບລັອກປູກຫຍ້າ, ແຜ່ນຕົກແຕ່ງແຜງຜະຫນັງດ້ານນອກບ້າຕາ, ຝ້າເພດານຜະຫນັງເຊີງຊາຍລະບຽງຫນ້າ ລວດຫນ້າບັນໄດກາແລສາກກັ້ນຫ້ອງບານເພີ້ຍແລະແຜ່ນລາຍສະຫລຸສໍາເລັດຮູບຫລາຍຂະຫນາດລວດຊຸບພາດສະຕິກລາຍຫລາກຫລາຍໃຫ້ເລືອກສາມາດນໍາໄປຕັດແລະຕົກແຕ່ງເພີ່່່ເຕີມເຕີມເປັນເຟີນິເຈີລາຍສະຫລຸຜະຫນັງລາຍສະຫລຸລະໃຊ້ຕົກແຕ່ງປະກອບສະຖານທີ່ຕ່າງໆສວຍງາມແລະ ເປັນເອກລັກອະລູມິນຽມຄອມໂພສິດ, ຄອມໂພສິດ, ເອຟາພີ, ທົນເສິກກະທູ້ສະຫນິມຄວາມຮ້ອນໄຟກົດດ່າງເຄມີ, ປະຫຍັດພະລັງວຽກບໍ່ບວມນ້ໍາປາສະຫລາກສານພິດບໍ່ລາມ ຟະ, ໄຟເບີກະລາດຫລືໃຍແກ້ວຊະນິດພິເສດຄືແມ່ນຫຍັງ, Fibergrate, Strongwell, Webforge, ວຽກຊ່ອມແຊມພື້ນ, ວັດສະດຸເຄືອບພື້ນຜິວ, ອີພັອກຊີ່, ອີພ໊ອກຊີ່, ອີພັອກຊີ່, ພື້ນອີພ໊ອກຊີ່ , โพลียูรีเทน, พีวีซี, กาว, ไบโอ, Bio, PU ສີມັງ, ການເຄືອບ, ແກນ, PE ปรับปรุงพื้นโรงงานอุตสาหกรรม, ครัวโรงแรม, เคลือบบ่อทนสารเคมี, อะครีลิค, ซ่อมรอย แตกร้าวรั่วซึม, โค้ทติ้ง, กันซึมดาดฟ้า, บ่อเก็บสารเคมี, รางน้ำไฟเบอร์กล๊าส, หลังคาเมทัลชีท, วัสดุทดแ ທົນເຫລໍກ, ຫິນ, ໄມ້ທຽມສັງເຄາະ, wpc ພາສະຕິຄະ, ຊີວະພາບ, ລີໄຊເຄີນ, ອຸປະກອນ, ຟໍວັນ, ລູຟັນ, ພື້ນກັນສຶກ, ກັນກະແທກ, ຮາງນ້ໍາລົ້ນຮອບຂອບສະລອຍນ້ໍາ, ແຜ່ນລຽບ, ບານເກັດ , ແຜ່ນພື້ນຢາງປູຮອບແທ່ນເຄື່ອງຈັກ, ພາເລດຖາດຮອງຊັ້ນວາງ, ພື້ນໂຮງເຮືອນ, ບລັອກຕົວຫນອນບລັອກປູຖະຫນົນຕົກແຕ່ງພື້ນສະຫນາມຫຍ້າສໍາເລັດຮູບປັບປ່ຽນຮວງຈຸ້ຍ GFRP Composite Diamond Top Manhole Covers Checker Plate surface (ຝາປິດບໍ່ຄອບທໍ່ ພັກໄຟເບີກະລ໊າສະກັນລື່ນຊະ นิดสั่งตัดตามขนาดได้ทันที) www.chancon.co.th ຄວາມກະຕັນຍູ SOLUTIONS ອອກແບບແລະວິທີການຕິດຕັ້ງ: ນອກຮອບ Manhole ປົກ, Square, ຮູບສີ່ແຈສາກ, Circle ວົງ, ປະດິດ Simple Culvert Gully, Tile Strip Cell ເພດານຄວາມກະຕັນຍູ, ຜ່ານວິທີການ Basement Sidewalk , paving ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສຕິກ, ປະທັບຕາ Manhole, ມືຂຸມຍົກນັກກິລາຍົກ, ຈັບອ່າງ, ທີ່ຢູ່ອາໄສມືຖືນ້ໍບາຍນ້ໍາ, ຄວາມສະອາດອອກ, ຖະຫນົນລົດແລ່ນຊັ້ນ Grates Drain ອາບນ້ໍາ, Sewer, ພາວະຖົດຖອຍແຜ່ນປິດທໍ່ອຸດຕັນ, ຫນຽວຫລໍ່ສີເທົາ Iron, ທົດແທນສະແຕນເລດ, ໄມ້ Lumber WPC ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ເຟີນິເຈີທີ່ມີເສັ້ນໃຍແກະສະຫລັກ, ທໍ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ທໍ່ດູດ, ທໍ່ດູດ, Lattice, Rainer Shooter Water, Rack Trash, Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel, ຕະແກງກັ້ນຊ່ອງແສງບັງໄ ອຸປະກອນຕົກແຕ່ງຕູ້ລ້ຽງປາສວຍງາມ EggCrate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Screen Filter Media Diffusers Panel, DIY Abstract Plastic material Board Pond Marine Aquarium, HVAC air vector acrylic return / Double deflection Grid Louver, terrarium vivarium ໃຊ້ສໍາຫລັບສ້າງເປັນແຜງຕະແກງເພື່ອກັ້ນຊ່ອງໄຟກອງແສງ ຈາກຫລອດແອນອີດີ / ຟູອໍເລດເຊນ (Led / Fluorescent) ແຜງສາກແຜ່ນຝ້າເພດານຜະຫນັງມ່ານລະແນງຕາຕາຫນ້າກາກກອງຊ່ອງລົມແຜ່ນບານເກັດຮູລະບາຍອາກາດຄອບຄຸມປົກປິດວຽກລະບົບໄຟຟ້າປະດັບອາຄານແຜງກັ້ນບັງໄຟຕົກແຕ່ງຕູ້ໂຊສິນຄ້ ນໍາໃຊ້ທົດແທນຝ້າເພດານອະລູມິນຽມລະບາຍອາກາດໃຊ້ເປັນອຸປະກອນຕົກແຕ່ງສໍາຫລັບລ້ຽງປາສວຍງາມເຮັດແຜງກັ້ນແບ່ງຫ້ອງໂຄງສ້າງຜະຫນັງບໍ່ຕູ້ພາຊະນະເພາະລ້ຽງສັດນ້ໍາກຸ້ງກົບຊາລາແມນເດີ FRP Products, GFRPS, Glass Fiber Reinforcment Rebar Polymer, Reinforced Fiberglass ຝາອັດປາກຂຸມ, ອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງ Composite, ້ໍາຢາງ vinyl ester, bollards ຮາກລໍາຕົ້ນເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນຖະຫນົນຫົນທາງຂຸມ sculpture ຄວາມປອດໄພໃນການອອກແບບ, ທັດ Exterior Garden gratings ຕົ້ນໄມ້ຂະຫນາດໃຫຍ່, ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ Ring ການປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພຂອງກອງ Grating Paver ຕົວຖ່ວງແຮນຍ່າງຕາມຖະຫນົນຖະຫນົນ, molded, pultrusion, profiled profiles, ກວມເອົາ gratings ປະສົມປະສານຮວບຮວມ welded, ຊັ້ນ Cage, Stairs treads nosing, ບໍ່ແມ່ນ slip skid stairways, ຂັ້ນຕອນຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ກວມເອົາຜ້າມ່ານ, Handrail, S tructural ຮູບ, ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການ catwalks, ພື້ນຄູ່ກາລາດ, ສະຖາປັດຍະນ້ໍການປົກຫຸ້ມຂອງ, ditch, ຮາງນ້ໍາ, ຫນ້າຈໍຫຸ້ມ, ສະຫນັບສະຫນູນສື່ມວນຊົນ, ຕາຫນ່າງທາງອາກາດ, ລາງລົດໄຟ, ທາງຍ່າງ, ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຫຼາຍ, ການຄຸ້ມຄອງ, ເວົ້າ, gritted, minimesh, ້ໍາຢາງເສັ້ນໃຍສັງເຄາະ unsaturated, Palette ປະຕູຮົ້ວປ່ຽງ Windows, ເວທີການປະຕິບັດງານ, ພື້ນຖານສໍາລັບການລະເບີດ, ຄວາມຄິດໃຫມ່ອຸປະກອນການອອກແບບໃຫມ່ໆ, ສ່ວນປະກອບ, ສະຖາປັດຕະຍະກໍາແລະອຸດສາຫະກໍາ, ລະບົບສາຍແຂນ, ຂົວ, ຮົ້ວ, ຮົ້ວ, ທໍ່ກົມ, ທໍ່, ມຸມ, ຕາຫນ່າງ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ຄອນກີດ Polyurethane, ຂັດ, ປັບລະດັບ Epoxy ຕົນເອງ, ເສັ້ນທາງຊັ້ນ, ເສັ້ນໄຍກາກບອນ, ແຂງຊັ້ນ, Grouting, ກັນນ້ໍາ, ການປິ່ນປົວນ້ໍາເສຍ, tower Cooling ປຽກ, ຖັນ, overflow, Laminate, ໂລຫະ, ອະລູມິນຽມຄອມໂພສິດ, Rack, conductor, skylight, polycarbonate, ຢາງ , acrylic, UPVC, ABS, PS, PC, exotic PET,, ແຜ່ນ Flat, translucent, Anti-UV ຄົງທີ່, ແຜ່ນແຂງຕົກແຕ່ງ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ເຮັດໃຫ້ຄໍາສັ່ງໂດຍ fabricators ມືອາຊີບ, Hot Dip Electroforge Gal ລາຄາ, Infosoft FRP Flexible Grating ຄຸນສົມບັດ: •ນ້ໍາຫນັກເບົາ, ທົນທານຕໍ່ສູງ, ທົນທານຕໍ່, ຄວາມທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນແລະອຸນຫະພູມ (ທົນທານຕໍ່ UV), ທົນທານຕໍ່ກັບສານເຄມີຫຼາຍທີ່ສຸດ•ບໍ່ໃຊ້ໄຟຟ້າຫຼືໄຟຟ້າຍັງປ້ອງກັນສາຍໄຟ (ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ) , insulated •ໃຫ້ການປົກປ້ອງ retardant ໄຟເພີ່ມສາຍໃນກໍລະນີຂອງໄຟພາຍນອກ (extinguish ຕົນເອງ) CHANCON PROFILE / ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท แชนคอนแชน คอนผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบงานฝาตะแกรงระบายน้ำแผ่นปูพื้นทางเดินทาง ລາດຊັນຕະແກງດັກຂະຫຍະຂະ ງະງະຟຸດບາດຕະແກງຂັ້ນບັນໄດແຜ່ນພື້ນຍົກລະດັບນ້ໍາຫນັກເບົາຝາບໍ່ຊໍາລະລ້າງຝາທໍ່ປິດບໍ່ພັກແຜ່ນພື້ນໃນລານຜະລິດເອນົກປະສົງແຜ່ນຮອງປູຮອບເຄື່ອງຈັກແຜ່ນທາງຍ່າງດ້ານເທິງລະບົບບໍາບັດນ້ໍາເສຍປ້ອງກັນການເສິກກ່ອນຈາກທັງສະຫນິມແລະສານ เคมีประเภทของตะแกรงและฝาบ่อสำเร็จรูป / ຜູ້ຊ່ຽວຊານ grating (5 ตะแกรง,2ฝาบ่อ) 1. PP / ABS ລອຍນ້ໍາລອຍນ້ໍາລົ້ນ grating ตะแกรงน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ ตะแกรงพลาสติก PP / ABS มี2ขนาดมาตรฐานกว้าง 25cm. ແລະ 30 ຊົມ ມີ2ເກດຄຸນະພາບໃຫ້ເລືອກໃຊ້ວຽກນ້ໍາຫນັກເບົາບໍ່ເປັນສະຫນິມແຕ່ຮັບແຮງໄດ້ນ້ອຍທີ່ສຸດຖ້າໂດນແດດດົນ ໆ ຈະມີບັນຫາກອບແຕກໄດ້ລາຄາຖືກທີ່ສຸດເຫມາະສໍາຫລັບໃຊ້ໃນທີ່ລົ່ມຮອບສະລອຍນ້ໍາບໍລິເວນທີ່ບໍ່ມີລົດແລ່ນຜ່ານ แกนคู่สามารถใช้งานกับสระรูป ทรงโค้งวงรีได้2PVC / PP / PE Plastic ຄວາມກະຕັນຍູตะแกรงพลาสติกสำเร็จรูปตะแกรงพลาสติก PVC / PP / PE มี2ขนาดมาตรฐาน 25x100cm. ແລະ 30x100cm ນ້ໍາຫນັກເບົາຮັບແຮງໄດ້ດີສໍາຫລັບໃຫ້ຄົນຍ່າງຜ່ານຖ້າໂດນແດດຫລືສານເຄມີເລື້ອຍໆອາດມີບັນຫາກອບແຕກໄດ້ລາຄາຖືກກວ່າເຫລໍກເຫມາະສໍາຫລັບໃຊ້ໃນທີ່ລົ່ມວຽກຈັດສວນທາງຍ່າງບໍ່ປາຄາຟຄອນໂດມິນຽມຫມູ່ບ້ານຈັດສັນຮອບໂຮງວຽກ3HDG STEEL GRATING ຕະແກງເຫລໍກເຊື່ອມຊຸບກັນວາໄນສໍາເລັດຮູບເປັນຕະແກງເຫລໍກຈຸ່ມຮ້ອນຊຸບ Hot Dip Galvanized ຜະລິດຈາກເຫລໍກແຜ່ນນໍາມາເຊື່ອມເຂົ້າກັນດ້ວຍລະບົບ CO2 Robot ເຮັດໃຫ້ເນື້ອເຫລໍກຫລອມກັນສະຫນິດກວ້າງເຊື່ອມມືແລ້ວນໍາໄປຊຸບ HDG ຂໍ້ດີຄື ຮັບແຮງໄດ້ສູງກວ່າວັດສະດຸທຸກຊະນິດສ່ວນຂໍ້ເສຍຄືເປັນສະຫນິມໄດ້ແລະມີໂອກາດຖືກໂຂມຍະຂະຫນາດມາດຕະຖານ 25x100cm ແລະ 30x100cm4FRP Fiberglass Grilles / GRATING ຕະແກງໄຟເບີກ໊າສເສີມແຮງຜະສົມເລຊິ່ນ “ຕະແກງ FRP” ໃຊ້ທົດແທນຕະແກງສະແຕນເລດ / ອະລູມິນຽມຜະລິດຈາກເສັ້ນໃຍໄຟເບີຜະສົມເລຊິ່ນນ້ໍາຫນັກເບົາຮັບແຮງໄດ້ສູງທົນສານເຄມີບໍ່ เป็นสนิมทน UV แสงแดดไม่แตกผุกร่อนขโมยไม่ต้องการ บำรุงรักษาง่ายอายุการใช้งาน 50-100 ปีเป็นวัสดุทางเลือกใหม่เลือกสี ให้เข้ากับพื้นได้ตามต้องการแผ่นมาตรฐานขนาดใหญ่ 1.5x4M. ເຫມາະເຮັດແຜ່ນພື້ນຍົກລະດັບຫລືສາມາດສັ່ງໄດ້ທຸກຂະຫນາດຕາມທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການໄດ້ຮັບປະກັນ 3-5 ປີ5Ductile Side Drain Grating ຕະແກງດັກຂະຫຍະຄັນຫິນຂ້າງຟຸດບາດຜະລິດຈາກເຫລໍກຫລໍ່ຫນຽວ (Casting Ductile Iron) ອອກແບບເພື່ອໃຊ້ເປັນຕະແກງດັກ ແຍກເສດຂະຍັບດັກໃບໄມ້ຄັນຫິນດ້ານຂ້າງຮິມຟຸດບາດຕາມມາດຕະຖານເທສະບານກົມໂຍທາທິການແລະຜັງເມືອງກົມທາງຫລວງຊົນບົດແລະກະທົມ ຂະຫນາດມາດຕະຖານໄດ້ແກ່ 10x40cm 15x30cm, 15x40cm, 20x57cm ແລະ 25x50cm6Ductile Cast Iron Manhole Cover ຝາປິດທໍ່ເຫລໍກຫລໍ່ຫນຽວຜະລິດຈາກວັດສະດຸເຫລໍກຫລໍ່ຫນຽວ (Ductile Cast Iron) ຜະລິດຕາມມາດຕະຖານ EN124 ມີຜົນທົດສອບຈາກສະຖາບັນຮັບຮອງຄຸນະພາບໃນເມືອງໄທເລືອກໄດ້ຫລາຍເກດຄຸນະພາບຕັ້ງແຕ່ 2-40 ຕັນມີທັງຮຸ່ນທີ່ มีบานพับและตัวล็อคป้องกันขโมยติด ตั้งและบำรุงรักษาง่ายราคาขาย 1 ชุดประกอบด้วยตัวฝาพร้อมเฟรม7FRP Manhole ປົກฝาบ่อพักไฟเบอร์เสริมแรงพร้อมเฟรม ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์เสริมแรง FRP ได้ ຕາຕະລາງ EN124 ບໍ່ເປັນສະຫນິມຮັບແຮງຄືຄືເຫລໍກຫລໍ່ຫນຽວເລືອກໄດ້ຕັ້ງແຕ່ 2-40 ຕັນສວຍງາມເຂົ້າກັບທໍາມະຊາດບໍ່ເປັນທີ່ນິຍົມໃນຕະຫຼາດຮັບຊື້ຂອງເກົ່າບໍ່ມີບັນຫາໂດນຂະໂມຍ 8 Screen Partition Panels Anti-Bird Netting ສາກຝ້າຜະຫນັງ ม่านแผงกั้นพาร์ทิชั่นกันสาด ระแนงตาข่ายผลิตและออกแบบติดตั้งโดยสถาปนิกผู้เชียวชาญสำหรับงานตกแต่งสำนักงานคลังสินค้าโรงงานอาคารมีดีไซน์กลิ่นงานสถาปัตยกรรมไม่ซ้ำซากจำเ ປະຍຸກໃຊ້ແບ່ງກັ້ນພື້ນທີ່ໃຫ້ເປັນສັດສ່ວນເນັ້ນເສີມຄຸນຄ່າທີ່ຢູ່ອາໄສໄດ້ທັງພາຍໃນແລະດ້ານນອກທົນແດດຝົນນ້ໍາຫນັກເບົາໃຊ້ບັງຕາບັງແດດທົດແທນວຽກລະແນງໄມ້ GRP / FRP / Fiberglass / Composite for Grating and Manhole Covers ວັດສະດຸເທກໂນໂລຍີໃຫມ່ກໍາມະວິທີຂັ້ນ ตอนผลิตจากเส้นใยไฟเบอร์ผสมเรซิ่น น้ำหนักเบารับแรงได้สูงกว่าเหล็กหล่อไม่เป็นสนิมไม่แตกผุกร่อนขโมยไม่ต้องการฝาปิดได้สนิทป้องกันกลิ่นได้ดีเลือกส ให้เข้ากับพื้นผิวได้ตามต้องการ ถูกออกแบบสำหรับคุณสมบัติตะแกรง FRP (Fiberglass + ້ໍາຢາງ) .vs. Steel vs ຜູ້ຜະລິດ (PE / ABS / PVC) 1. ไม่เป็นสนิมไม่ผุกร่อนไม่กรอบ แตกทนความร้อนและแสง UV ทนการกัดกร่อนจากสารเคมีเช่นโซดาไฟ, ແລກ, กรดซัลฟูริก ฯลฯ สามารถตรวจ สอบอุณหภูมิและสารเคมีที่ ທົນໄດ້ຈາກຕາລາງຜົນການທົດສອບ2ອາຍຸການໃຊ້ວຽກຫລາຍກວ່າ 50 ປີຂຶ້ນຢູ່ກັບລັກສະນະການໃຊ້ວຽກເຊັ່ນຄວາມຖີ່ຂອງການສໍາຜັດສານເຄມີໃກ້ທະເລຫລືໃຊ້ວຽກໃນທີ່ອຸນຫະພູມິສູງ (ເຮັດຢ່າງໄຮຈຶ່ງຈະສາມາດແກ້ບັນຫາສະຫນິມຜຸ ກ່ອນການກັດກະລ່ ອົນເຫລໍກໄດ້ອຍ່າງມີປະສິດທິພາບ)3ເສີມຄຸນຄ່າໂຮງວຽກສາມາດເລືອກສີໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມຫລືເຮັດເປັນເຂດ Safety Zone ໂດຍໃຊ້ສີໃຫ້ສະດຸດຕາໄດ້ເຊັ່ນເຫລືອງ, ຟ້າ, ເທົາ, ດໍາຂຽວຯ ລະຯ Insulation Material: ເປັນສນວນບໍ່ນໍາໄຟຟ້າບໍ່ เป็นสื่อล่อฟ้าป้องกันไฟฟ้าดูด 4. น้ำหนักเบากว่าเหล็ก แต่รับแรงได้ สูงเหมือนเหล็กทั่วไปจึงทำให้การเคลื่อนย้ายติดตั้งและบำรุงรักษาเร็วและง่ายขึ้น 5. ราคาใกล้เคียงก ບໍເຫລໍກຫລໍ່ສູງກວ່າເຫລໍກຊຸບກັນວາໄນແຕ່ FRP ບໍ່ມີບັນຫາໂດນຂະໂມຍເນື່ອງຈາລະຈອນຂາຍບໍ່ໄດ້ໃນຕະຫຼາດຮັບຊື້ຂອງເກົ່າບໍ່ເປັນສະຫນິມບໍ່ກອບແຕກຈາກແສງແດດຮັງສີ UV ຫນຽວທົນຮັບແຮງຄືຄືເຫລໍກນ້ໍາຫນັກເບົາຕັດໃຫ້ເຂົ້າຮູບ ได้6เนื้อผิวไฟเบอร์มีความละเอียดสูงปิด ได้สนิทแน่นเสมือนมีซีลยางในตัวป้องกันกลิ่นได้ดีไม่มีปัญหาโก่งงอเงียบสนิทเมื่อรถวิ่งผ่านด้านบนผิวเป็นฉนวน (ไม่นำ ໄຟຟ້າ) ທົນຄວາມຮ້ອນແລະແສງ UV ບໍ່ກອບແຕກຄືພາດສະຕິກ ABS, PVC, ແຜ່ນ poly 8 ນໍາເຂົ້າຈາກຍຸໂລບອະເມລິກາຊຶ່ງມີຄຸນະພາບເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນຕະຫຼາດສາກົນມາດຕະຖານ EN124 ພ້ອມຮັບປະກັນຄຸນະພາບ 3-5 ປີຂຶ້ນຢູ່ກັບຮຸ່ນແລະແບບ ກໍລະນີມີບັນຫາປ່ຽນໃຫມ່ໃຫ້ທັນທີ CHANCON: Distributor and Manufacturer from direct factory ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການອອກແບບທາງດ້ານຄຸນນະພາບ / ການອອກແບບສະຖາປັດຍະກໍາສໍາລັບຜະລິດຕະພັນ FRP ບໍລິສັດແຊນຄອນຜະລິດແລະຈໍາຫນ່າຍ FRP Grating, ຕະແກງຮາງລະບາຍນ້ໍາ, ຕະແກງທາງຍ່າງໂດຍເສພາະວັດສະດຸໄຟເບີ (FRP) ເພື່ອທົດແທນວຽກໂລຫະເຫລໍກແສຕົນເລືອອະລູມິນຽມທອງເຫລືອງທອງແດງເຫລໍກຫລໍ່ຫນຽວເກໍບໍເກດຊຸບຊິງຊຸບກັນວາ ໄນສໍາຫລັບວຽກກໍ່ສ້າງຫ້ອງເຢັນ, ຄອກປະສຸສັດ, ຟາມຫມູເປັດໄກ່, ກົງນົກສຸນັກ, ອຸໂມງ, ເຂື່ອນທ່າທຽບເຮືອສະພານຂ້າມແມ່ນ້ໍາທາງຍົກລະດັບກົມທາງຫລວງຊົນບົດທາງດ່ວນການໄຟຟ້າ งค์การโทรศัพท์โครงสร้างสามมิติกำแพง หน้าผาภูเขาสนามบินตึกสูงสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ສາຍວາງໃນທາງເຄມີແລະການກັ່ນຕອງພືດ, ໂຮງກັ່ນ, ໂຮງງານໃນຕ່າງປະເທດ, ນ້ໍາມັນແລະອາຍແກັສຂະແຫນງການ, ຫ້ອງການ Tunnels ຫົວ | ຂາຍສົ່ງຂາຍປີກຕ້ອງການຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍ | ຮັບສະຫມັກ Sales Representative, Dealer, Agent, Distributor CHANCON COMPANY LIMITED wwwchanconcoth || GratingThai ຈໍາກັດ www.GratingThai.co.th (ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม 2) เลขที่ 199 ซอยท่าข้าม 21/1 แสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครประเทศไทยບາງກອກປະເທດໄທ #Mobile (Sales): 081 932 7894, 061 647 0184-6 ໂທລະສັບ: 02 451 0780-1, ໂທລະສານ: 02 451 0786 ອີເມວ: mkt@chancon.co.th ສາຍ (iD): ເວັບໄຊທ໌ທ໌ແວຣ໌ iCHANCON ຮູ້ຈັກວິທີ: http://GratingThai.com, http: // ຕະແກງໄຟເບີ ກາລາດ – ຝາບໍ່ເຫລໍກຝາທໍ່ com FaceBook: wwwfacebookcom / GratingThai, wwwfacebookcomFrpFiberGratingchancon, wwwfacebookcom / FrrGGratingManholeCover Youtube: http: // wwwyoutubecom / mktchancon, http: // wwwyoutubecom / FPGratingFiberglass, http: // wwwyoutubecom / FPGratingManhole | Twitter: https://twitter.com/GratingThai https://plus.google.com/+ChanconThຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເສັ້ນໃຍສັງກະສີແບບມຸ້ງມຸ່ນະຂອງເລົາເຮັດໃຫ້ຄຸນສົມບັດການຕໍ່ຕ້ານການກັດກ່ອນທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ໂດຍສະເພາະເມື່ອປຽບທຽບກັບຜະລິດຕະພັນພື້ນເຮືອນເຫລັກ. ຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຊີວິດຍາວແລະຄວາມປອດໄພແມ່ນຄຸນນະພາບທີ່ດີກວ່າຂອງຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ fiberglass grating, ແລະຄຸນລັກສະນະທີ່ບໍ່ແມ່ນ conductivity ຂອງເຂົາເຈົ້າໄຟຟ້າເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນທາງເລືອກທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບ grating ຊັ້ນ. ພວກເຮົາສະຫນອງປະເພດຂອງການປະກອບໄຟເບີກາດແບບຈໍານວນຫຼາຍສໍາລັບທຸກໆຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການໂຫຼດຂອງທ່ານ. ການນໍາໃຊ້ເຕົາໄຟຟຸ້ງສະຕິກແມ່ນໃຊ້ໃນການກວດສອບແສງຕາເວັນສະຖາປັດຍະກໍາແລະພື້ນເຮືອນຂອງເສັ້ນໃຍສັງກະສີໄປສູ່ເສັ້ນທາງຍ່າງຕາມມາດຕະຖານແລະການນໍາໃຊ້ການເຄື່ອນທີ່ສູງ. ພື້ນຜິວຂອງສີຂີ້ເຖົ່າແລະສີສັນມາດຕະຖານຫຼືສີທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນເຫມາະສົມກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໄຟເບີກາດ. ເລືອກຈາກປະເພດຂອງຢາງພາລາຂອງພວກເຮົາສໍາລັບຜະລິດຕະພັນພື້ນເຮືອນທີ່ມີເສັ້ນໃຍສັງກະສີທີ່ເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຕໍ່ຕ້ານການກັດກ່ອນຂອງທ່ານ.
ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ເສັ້ນໄຍປະກອບດ້ວຍເຟືອງແກມສະຫຼັກໄຟຟ້າ (FRP) ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍໂລຫະທີ່ມີເສັ້ນໃຍໃຍສັງເຄາະດ້ວຍທໍ່ thermosetting ເພື່ອສ້າງເປັນແຜງທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນ, ຫນຶ່ງແຜ່ນ. ຢາງ 65% / 35% ກັບອັດຕາສ່ວນນ້ໍາຫນັກແກ້ວໃຫ້ສູງຕໍ່ການກັດກ່ອນ. ດ້ານຫນ້າ Meniscus ຫຼືຫນ້າດິນທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ຈະສະຫນອງການຕໍ່ຕ້ານເມື່ອທຽບກັບພື້ນໂລຫະແລະຜະລິດຕະພັນພື້ນເຮືອນອື່ນໆ. ຜະລິດຕະພັນນີ້ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມໃນການກັດກ່ອນ. ການກໍາຈັດໄຟຟ້ານ້ໍາແຂໍງ Pultruded Grating
Pultruded fiberglass grating is made using polyester isophthalic grade high grade, vinyl ester or phenolic resin systems with veil surface synthetic, making it corrosion resistant, lightweight and durable. ເສັ້ນໃຍສັງເຄາະ Pultruded ມີພື້ນຜິວທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສໍາລັບຄວາມປອດໄພແລະມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງກວ່າອັດຕາສ່ວນນ້ໍາຫນັກກ່ວາຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເສັ້ນໃຍສັງເຄາະ. ຢາງເຫຼັກ 35% / 65% ກັບອັດຕາສ່ວນຂອງແກ້ວສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມແຂງຫຼາຍແລະການຕໍ່ຕ້ານການກັດກ່ອນຫນ້ອຍກ່ວາເຄືອຂ່າຍເສັ້ນໃຍສັງເຄາະ. ຜະລິດຕະພັນນີ້ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການໃຊ້ເວລາດົນນານສໍາລັບພື້ນເຮືອນຂອງເສັ້ນໃຍສັງກະສີ.
Fiberglass Covered Grating Our fiberglass covered grating isalong-lasting, molded fiberglass flooring product that combines smooth, gritted or checker plate and grated molded manufactured with any of our resin systems. ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ເຫມາະສົມໃນເວລາທີ່ຮວບຮວມຂອງຊັ້ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ 100%. ເສັ້ນໃຍສັງເຄາະຂອງພວກເຮົາກວມເອົາຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ໃນບ່ອນທີ່ມີການໂຫຼດແລະເກັບຮັກສາທີ່ມີເສັ້ນທາງຕີນແລະລົດເຂັນທີ່ສູງ, ບ່ອນທີ່ມີພື້ນທີ່ສູງ, ທີ່ເຫມາະສົມ. ມັນມີມູນຄ່າຄວາມແຂງແຮງກວ່າ 50% ສູງກວ່າລະດັບຕາຂ່າຍຕາຫນ່າງເປີດແລະການປົກຫຸ້ມຂອງຝາແກ້ວມາດຕະຖານທີ່ມີມາດຕະຖານທີ່ຫມັ້ນຄົງ.
ຜະລິດຕະພັນ Fiberglass ທົນທານ bullet bullet ແຜ່ນທົນທານຕໍ່ຕ້ານແຜ່ນປ້າຍວົງກົມຂອງພວກເຮົາມີການຕໍ່ຕ້ານທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ມີນ້ໍາຫນັກຫນ້ອຍກວ່າ 25% ຂອງກະດານເຫຼັກທຽບເທົ່າ. ປະຈຸບັນມີໂປແກຼມ fiberglass ທີ່ມີຄວາມປອດໄພທາງດ້ານການຄ້າສໍາລັບທຸລະກິດ, ເຮືອນຫຼືສະຖາບັນການບໍລິການຂອງທ່ານ, ໂຄງການໄຟຟ້າເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງຄວາມປອດໄພທີ່ທົນທານຕໍ່ເສັ້ນດ່າງທີ່ມີປະສິດທິຜົນເພີ່ມເຕີມຂອງຄວາມທົນທານ, ການຕໍ່ຕ້ານການກັດກ່ອນ, ການບໍ່ນໍາໄຟຟ້າ, ການນໍາໃຊ້ຄວາມຮ້ອນຫນ້ອຍແລະນ້ໍາຫນັກເບົາ.
ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງຜະລິດຕະພັນ Fiberglass Grating ກໍາ ລັງໄຟຟ້າຂອງພວກເຮົາຢ່າງຫນັກແມ່ນມີຢູ່ໃນລະບົບເຄືອຂ່າຍທັງແບບ molded ແລະ pultruded. ທັງສອງປະເພດຂອງການກັ່ນຕອງໄຟຟ້າຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ຮັບຜິດຊອບແມ່ນການອອກແບບເພື່ອປະຕິບັດການຍົກແລະລົດບັນທຸກລົດ trailer ທີ່ຜະລິດຕະພັນຮຸ້ນ FRP ແບບ molded ແລະ pultruded ພື້ນເມືອງບໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນ. ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມທົນທານຫຼາຍຂຶ້ນສໍາລັບພື້ນທີ່ການຈະລາຈອນທີ່ສູງກວ່າເກົ່າ. ນອກຈາກນີ້, ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ Fiberglass Grating ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄລຍະຫ່າງທີ່ກວ້າງກວ່າໄລຍະໄກກ່ວາໄຟເບີກາດແບບດັ້ງເດີມ.
Fiberglass Stair Treads ແລະ Fiberglass Stair Tread ປົກ Lightweight ແລະງ່າຍທີ່ຈະຕິດຕັ້ງ, treads fiberglass ບັນໄດທີ່ມີຢູ່ໃນທັງສອງປະເພດ molded ແລະ pultruded ກັບຄໍາວ່າຊັ້ນ fiberglass ເວທີຮູ້ບຸນຄຸນໄດ້. ການປົກຫຸ້ມຂອງນ້ໍາກັ່ນຕອງ Fiberglass ແມ່ນເຮັດຈາກແກ້ວ molded ແລະລະບົບການປູກຢາງພາລາທີ່ເປັນ corrosion ແລະຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນກະທົບ, retardant ໄຟແລະບໍ່ມີ conductive. ພວກເຂົາສະຫນອງການຄຸ້ມຄອງທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ດ້ານການປ້ອງກັນທີ່ທົນທານຕໍ່ການແຜ່ກະຈາຍສໍາລັບຂັ້ນຕອນຂອງຊີມັງ, ໂລຫະແລະໄມ້.
Handrails Fiberglass ແລະ Ladders Fiberglass Fiberglass Handrails ແລະ Ladders Fiberglass ລະບົບ Handrail Fiberglass ຖືກຜະລິດຈາກອົງປະກອບ fiberglass pultruded ແລະເຊື່ອມຕໍ່ thermoplastic molded. ລະບົບປະຕິບັດການເສັ້ນໄຍແກ້ວແບບໂມດູນແບບໂມດູນຂອງພວກເຮົາມີຢູ່ໃນຮູບແບບທີ່ມີຂະຫນາດ2ນິ້ວຫຼື2ນິ້ວທີ່ງ່າຍຕໍ່ການຈັບ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບພື້ນທີ່ທີ່ມີການຈະລາຈອນສູງ. ສາມາດຕິດຕັ້ງແລະຍົກເລິກຖົງໄຟຟ້າຂອງພວກເຮົາໃນການນໍາໃຊ້ປະໂຫຍດຕ່າງໆຈາກປັ໊ມສູບນ້ໍາໄປຍັງຖັງ, ອາຄານ, ທຽນ, ອຸປະກອນຕ່າງໆ, ແລະອື່ນໆ.
ໄຟລ໌ແນບໄຟຟ້າແລະສາຍໄຟຟິວເຕີ ໄຟລ໌ແນບໄຟຟ້າແລະຄລິບຂີ້ເຫຍື້ອຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮັບປະກັນໂຄງປະກອບໄຟຟ້າຫຼືແຜ່ນເພື່ອໂຄງການສະຫນັບສະຫນູນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກມັນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຍຶດເອົາປະຕູຮົ້ວທີ່ຢູ່ຕິດກັນ, ຊຶ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ເກີດຂື້ນ. ທຸກໆໄຟລ໌ແນບໄຟຟ້າແລະຄລິບແມ່ນເຮັດດ້ວຍເຫລໍກສະແຕນເລດ 316 ແລະມີຂະຫນາດ 1, 1/2 ແລະ2ນິ້ວ.
ແຜ່ນໃຍໄຟຟາ ມີພື້ນຜິວທີ່ບໍ່ມີການນໍາໃຊ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເປັນການແກ້ໄຂເສດຖະກິດແລະປອດໄພໃນການຍ່າງຕີນ. ໃນສະພາບປົກກະຕິແລະ / ຫຼືກົດຂີ້ເຫຍື້ອ, ແຜ່ນ fiberglass ໃຫ້ລະດັບຂອງການຕໍ່ຕ້ານ corrosion ທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂແລະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກວ່າເຫຼັກສະແຕນເລດ. ແຜ່ນໃຍໄຟຟາສາມາດໃຊ້ໄດ້ດ້ວຍພື້ນຜິວທີ່ບໍ່ມີສີຂີ້ເຖົ່າຫຼືມີພື້ນຜິວທີ່ຫນາແຫນ້ນທີ່ຕ້ອງການການດູດຊືມກັນ.
ຮູບແບບໂຄງສ້າງ ຂອງເຟືອງແກມສະຫຼັກ ຮູບແບບໂຄງສ້າງ ຂອງເສັ້ນໃຍສັງກະສີ fiberglass ຂອງພວກເຮົາແລະ profiles ຂອງ fiberglass ທີ່ໄດ້ຖືກຜະລິດຈາກການປະສົມປະສານຂອງ fiberglass ແລະລະບົບທໍ່ thermosetting. ຮູບທັງຫມົດແມ່ນມີນ້ໍາຫນັກເບົາ, ທົນຕໍ່ຜົນກະທົບ, ການບໍາລຸງຮັກສາຕ່ໍາ, ບໍ່ສະຖິດ, ສະຖຽນລະພາບຕ່ໍາແລະມີຄວາມຫມັ້ນຄົງດ້ານມິຕິ, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕັ້ງແລະເຫມາະສົມສໍາລັບການໃຊ້ງານຫຼາຍ. ຮູບຮ່າງແບບລູກຄ້າມີຢູ່ຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍ.
Composite (GFRP) Gratings: GFRP (Glass Fiber Reinforced Plastic) ແມ່ນຫຍັງ? GFRP ແມ່ນອຸປະກອນການຜະລິດທີ່ເຮັດດ້ວຍເມັດໂພລີເມີທີ່ເສີມດ້ວຍເສັ້ນໃຍ, ເພື່ອສ້າງຄຸນລັກສະນະທາງກາຍະພາບແລະເຄມີທີ່ດີກວ່າ. GFRP ແມ່ນອຸປະກອນການຜະລິດເຊັ່ນ: ໂລຫະ, ໄມ້, ແກ້ວ, ຊີມັງ. ອຸປະກອນການ GFRP ມີຂໍ້ດີທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ກັບອຸປະກອນການຜະລິດອື່ນໆ, ລັກສະນະໃຫມ່ສາມາດຊື້ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ. GFRP Grating ແມ່ນຫຍັງ? ຜະລິດຕະພັນ GFRP ປະກອບດ້ວຍຜະລິດຕະພັນມຸງແບບພິເສດທີ່ມີຂະບວນການກ້ຽງ, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍເສັ້ນໄຍແກ້ວ, ຢາງ, ສານປະສົມແລະເມັດສີ. ຫຼັງຈາກທີ່ວັດຖຸດິບເຫລົ່ານີ້ແຂງແຮງ, ຮວບຮວມ GFRP ຖືກກົດດັນອອກຈາກຟອມ. ຮົ້ວ GFRP ທີ່ຖືກກັງວົນແມ່ນມີຄວາມສະຫວ່າງ, ຕ້ານທານກັບການກັດກ່ອນ, ມີການຕໍ່ຕ້ານທາງເຄມີແລະທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ສູງແລະບໍ່ມີການນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າ. Resin: ການຕໍ່ຕ້ານສານເຄມີ, ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະການຕໍ່ຕ້ານ UV ຂອງກຣາຟ GFRP ແມ່ນກໍານົດໂດຍລີນ. ຢາງແມ່ນເລືອກຕາມສະພາບແວດລ້ອມ; ຢາງພາລາສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປ, ສານປະສົມທີ່ເປັນສານສະກັດສໍາລັບສານເຄມີແລະຝຸ່ນ vinyl ester ສໍາລັບສິ່ງແວດລ້ອມສານເຄມີຢ່າງຮຸນແຮງ. ເສັ້ນໃຍແກ້ວ: ເສັ້ນໃຍແກ້ວແບບຫຼາຍໆຊັ້ນແມ່ນໃຊ້ໃນການຜະລິດ. ມ້ວນ GFRP ທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນມີຄວາມຕ້ານທານກົນຈັກສູງຍ້ອນເສັ້ນໄຍແກ້ວ. Additives: Additives, such as stabilizers UV, retardant flame and retardant density low smoke increase the resistance mechanical and chemical and add new features. Pigment: Pigments ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດໃຫ້ GFRP gratings ສີໃດໆ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນກັບການໃຊ້ GFRP gratings ໃນໂຄງການສະຖາປັດຕະ.
Pedestals ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ຖືກປັບໃຫ້ຖືກຕ້ອງ Fibergrate Pedestals ສາມາດປັບໄດ້ແມ່ນອົງປະກອບທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງທີ່ໄດ້ຮັບການອອກແບບເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກສູງ. ການຕັ້ງຄ່າໄດ້ອຍ່າງບໍ່ຈໍາກັດພາຍໃນລະດັບທີ່ກໍານົດໄວ້, ຕາຕະລາງມາດຕະຖານເພີ່ມກໍາແພງຂອບແລະພື້ນຖານລູກຄ້າທີ່ມີແຂນຂວາງສາມາດຍົກສູງຊັ້ນເທິງເບື້ອງຖານ. pedestals ແມ່ນສາມາດໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບ 1 “, 1-1 / 2” ແລະ2“ຕາຫນ່າງເລິກຢ່າງກວ້າງຂວາງ Fibergrate ຫຼື Chemgrate molded fiberglass gratings ຫົວຫນ້າຂອງ pedestal ແມ່ນ stocked ໃນ” ຫົວຫນ້າດຽວ “ແລະ” quad ຫົວຫນ້າ “ການອອກແບບສະດວກໃນການຕິດຕັ້ງໄດ້ໄວ, ປອດໄພແລະປະຫຍັດຂອງສູງ ເວທີ•ສາມາດປັບໄດ້ -. ສ້າງຫນ້າຍ່າງໃນລະດັບກ່ຽວກັບການລາດຊັ້ນ• VERSATILE – ທີ່ມີຢູ່ສໍາລັບທຸກ Fibergrate ແລະ Chemgrate gratings ຕາຫນ່າງຕາລາງ•ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະສິດທິພາບ – ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕິດຕັ້ງຕ່ໍາ, ຍ້າຍໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໄປສູ່ເຂດອື່ນໆ•້ໍາຫນັກເບົາ – Modular, ອົງປະກອບປັບແມ່ນ້ໍາຫນັກເບົາແລະຫຼຸດຜ່ອນການຍົກ• ການກັດກ່ອນທົນ – ເສັ້ນໃຍສັງເຄາະ Thermoplastic ແລະ ester vinyl pultruded ທົນທານຕໍ່ກັບອຸດສາຫະກໍາຫຼາຍທີ່ສຸດຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຊຸ່ມຊັ້ນ
Grating Pedestal ຮອງຮັບ ? Fiberglass Grating Grating Pedestal ຮອງຈາກເວລາທີ່ຈະໃຊ້ເວລາ, FRP ຮູ້ບຸນຄຸນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນຸນໃນພື້ນທີ່ທາງຍ່າງທີ່ນໍາໃຊ້ສະຫນັບສະຫນູນແລະ framing ວິທີການດັ້ງເດີມບໍ່ວ່າຈະ ບໍ່ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ຫຼືບໍ່ເຫມາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກ. ເຂດ, ເຊັ່ນ: ການເກັບຮັກສາທາງເຄມີ, ຍົກສູງ ສະຖານທີ່ຕັ້ງພື້ນຖານແລະສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ຫ້ອງການໂຮງງານການໃຊ້ຢາເຄມີ, ການນໍາໃຊ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນບໍລິເວນທາງຜ່ານລະບົບລະບາຍນ້ໍາແລະສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ລະບົບການກໍ່ສ້າງແບບຍືດຫຍຸ່ນ, ລະບົບສາຍໄຟ, ປິດກັ້ນການເຮັດວຽກທໍ່ແລະບໍລິການໄຟຟ້າຢູ່ພາຍໃຕ້. ຂອບ Pedoplane FRPP ຂອງພວກເຮົາສະຫນັບສະຫນູນທີ່ສາມາດຍົກສູງບົດບາດຊັ້ນຮຽນ FRP ຂອງພວກເຮົາ, ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າໃນຮູບແບບຕາຫນ່າງຂອງເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ. ຕາຕະລາງຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງພວກເຮົາສາມາດໄດ້ຮັບການເຂົ້າຮ່ວມ, ໃນ pedestal ຫນຶ່ງ eliminating pedestals ຫຼາຍໃນຂົງເຂດດຽວກັນ. ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ມີຂອບກວ້າງສາມາດໄດ້ຮັບການສ້ອມແຊມກັບພື້ນທີ່ຖ້າຕ້ອງການ, ແລະຍັງຢູ່ເທິງສຸດຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງພວກເຮົາ, ນໍາໃຊ້ 316 s / s ຂອງພວກເຮົາລົງຄລິບໃຫ້ເຫມາະສົມ. ນີ້ສະຫນອງພື້ນຖານແຂງທີ່ສຸດ, ເຊິ່ງສາມາດໃຊ້ເວລາໂຫຼດສູງ. ທີ່ມີຢູ່ໃນລະດັບຄວາມສູງ, ແລະສາມາດປັບໄດ້ຢ່າງສົມບູນເພື່ອຮອງຮັບພື້ນທີ່ບໍ່ສະດວກ, ພວກເຮົາສາມາດຈັດຫາ pedestal ເພື່ອໃຫ້ເຫມາະສົມກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານ.
FRP Stair Solutions – Stairs Treads ເກົ້າອີ້ນ້ໍາແຂໍງແລະເກົ້າອີ້ນັ່ງເປັນສິ່ງທີ່ສົມບູນສໍາຄັນໃນການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າທີ່ມີ molded ແລະ pultruded. ການຂຸດເຈາະທີ່ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນແລະລົ່ນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຜະລິດດ້ວຍຄວາມແຂງແຮງທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນແລະສະຫນອງພື້ນຖານທີ່ປອດໄພໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ທ້າທາຍຫຼາຍທີ່ສຸດ. ການຂີ່ມ້ານັ່ງແລະການປົກຫຸ້ມຂອງສາມາດສະຫນອງໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີ່ມີຂະຫນາດທີ່ຊັດເຈນລະບຸໄວ້ຫຼືໃນກະດານຫຼັກຊັບທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍ.
ການປົກຫຸ້ມຂອງ tread stair ເປັນວິທີທີ່ສະດວກສະບາຍເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນພື້ນຖານທີ່ທົນທານຕໍ່ຄວາມຫນາແຫນ້ນສໍາລັບເຄື່ອງຈັກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວທີ່ຍັງມີໂຄງປະກອບສຽງ. ການປົກຫຸ້ມຂອງນ້ໍາປະປານອນອາດຈະຖືກຕິດຕັ້ງຂື້ນເທິງໄມ້, ຂີ້ເຫຍື້ອຫຼືໂລຫະ. ສີອຸດສາຫະກໍາມາດຕະຖານມີສີຂີ້ເຖົ່າເຂັ້ມທີ່ມີຄວາມປອດໄພແລະມີສີຂີ້ເຖົ່າແສງສະຫວ່າງສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກດ້ານຖາປັດຕະຍະ. ພື້ນຜິວດ້ານອີນໂດຣ໌ອໍໂຕນີອໍໂຕ້ປະກອບດ້ວຍພື້ນຖານທີ່ມີຄວາມປອດໄພສູງສຸດແລະມີຄວາມທົນທານສູງ. ໄດ້ຮັບການປັບດ້ວຍຜ້າກັນເປືອກແຜ່ນແພສໍາຫລັບຄວາມທົນທານແລະຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ຜົນກະທົບ, ການປົກຫຸ້ມຂອງຝາຄອບເຫຼົ່ານີ້ມາຈາກຄວາມກວ້າງຂອງຄໍາສັ່ງ. ຄວາມຫນາມາດຕະຖານແມ່ນປົກຫຸ້ມຫນາຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຮຸນແຮງຫຼາຍ. ແຜງຍາວມາດຕະຖານສາມາດຕັດໄດ້ງ່າຍໃນຂະຫນາດໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ, ຫຼືມີຄວາມຊັດເຈນຕໍ່ຄວາມຍາວຂອງເຄື່ອງນຸ່ງ.
Nosing: Phosphorescent Nosing: ການປົກຫຸ້ມຂອງຝາອັດປາກມົດອາຫານສາມາດຖືກສັ່ງໃຫ້ມີການເຄືອບຟ phosphorescent ພິເສດສໍາລັບເຂດທົ່ງຫຍ້າ, ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມສະຫວ່າງແມ້ຫລັງຈາກທີ່ແຫລ່ງແສງສະຫວ່າງຕົ້ນຕໍຖືກຍົກເລີກ. ການຂັດແຍ້ງພິເສດແມ່ນດີເລີດໃນບັນດາຂົວທີ່ເຮັດວຽກເປັນບ່ອນສຸກເສີນໃນລະຫວ່າງການພະລັງງານໄຟຟ້າ, ບ່ອນທີ່ມີແສງສະຫວ່າງຢູ່ຕາມບ່ອນທີ່ມີແສງແດດແລະບ່ອນທີ່ມີຄວາມປອດໄພສໍາລັບການດໍາເນີນງານໃນຕອນກາງຄືນໃນການໃຊ້ງານພາຍນອກເຊັ່ນເຮືອບິນ. ນີ້ແມ່ນຈຸດພິເສດທີ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເຮືອບິນ ISO / TC ແລະເຄື່ອງຈັກທາງທະເລ – ບ່ອນທີ່ມີແສງສະຫວ່າງຢູ່ເທິງເຮືອບິນໂດຍສານ.
Fiberglass Grating> FRP Covers> Tread Grip ບາງຄຸນະລັກສະນະທີ່ເຫນືອກວ່າຂອງ TreadGrip ມີ. ຄວາມທົນທານ: TreadGrip ແມ່ນຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຂອງແຜ່ນແພທີ່ມີຜ້າແພທີ່ໃສ່ຝຸ່ນ polyester. ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ: TreadGrip ແມ່ນທົນທານຕໍ່ບັນດາສານເຄມີຕ່າງໆແລະເຫມາະສົມກັບການນໍາໃຊ້ຢ່າງສົມບູນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ. ງ່າຍທີ່ຈະຕິດຕັ້ງ: ຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງ TreadGrip. ອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ກັບເກືອບທຸກໆດ້ານເຊັ່ນ: ຊີມັງ, ເຫຼັກຫຼືໄມ້. ຄວາມຈິງທີ່ວ່າມັນຖືກສະຫນອງໃຫ້ເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ສໍາເລັດແລ້ວຫມາຍຄວາມວ່າມັນສາມາດຍ່າງໄປຕາມທັນທີດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຂັດຈັງຫວະຫນ້ອຍລົງ.
ສະຫນອງການຂີ່ມ້າ FRP ໃນທັງສອງຮູບແບບທີ່ໄດ້ຮັບການອອກແບບແລະການກໍ່ສ້າງ. ມີຢູ່ໃນ isopthalic, vinyl ester ແລະລະບົບປະຕິກິລິຢາຕໍ່ຕ້ານໄຟໄຫມ້ phenolic, ເພື່ອໃຫ້ເຫມາະສົມກັບການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາແລະພາຍໃນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວສີດໍາຂອງພວກເຮົາແມ່ນ: ສີຂີ້ເຖົ່າທີ່ມີສີເຫຼືອງ. ສີອື່ນໆທີ່ມີຢູ່ຖ້າທ່ານຕ້ອງການທີ່ເຫມາະສົມກັບຄວາມງາມແລະ / ຫຼືສິ່ງແວດລ້ອມ. ມີຢູ່ໃນຕາຕະລາງ tread ມາດຕະຖານຂອງພວກເຮົາຫຼືພວກເຮົາສາມາດຕັດກັບຂະຫນາດ, ພວກເຮົາຍິນດີຕ້ອນຮັບການສອບຖາມຂອງທ່ານ. ຜ້າສະແຕນເລດມາດຕະຖານຂອງພວກເຮົາມີພື້ນຜິວດ້ານເທິງ, ແຕ່ວ່າພວກເຮົາຍັງສາມາດສະຫນອງລໍ້ດ້ວຍທາງເທິງ, ເຊິ່ງກໍ່ແມ່ນການປ້ອງກັນ, ແຕ່ງ່າຍຕໍ່ການສະອາດ, ເຊັ່ນ: ອຸດສາຫະກໍາອາຫານແລະເຄື່ອງດື່ມ. ການຂີ່ລົດຂອງພວກເຮົາມີຄວາມປອດໄພກັບການສະຫນັບສະຫນູນມຸມພາຍໃຕ້ການນໍາໃຊ້ຂອງພວກເຮົາ 316 s / s ປະເພດ M ຖືລົງຄລິບ – ທ່ານສາມາດເບິ່ງຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນດັດຊະນີຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ molded ໃນ “ອຸປະກອນການຕິດຕັ້ງ” ຫນ້າ.
ຖ້າທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງອາຄານ, ດໍາເນີນທຸລະກິດຫຼືຈັດການພື້ນທີ່ສາທາລະນະທີ່ມີບັນໄດ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບປະກັນວ່າທຸກຄົນທີ່ໃຊ້ stairs ແມ່ນປອດໄພ. ການຄວບຄຸມນ້ໍາສະອາດແມ່ນວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ stairs ແມ່ນປອດໄພທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ການຍັບຍັ້ງການຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດສາມາດຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດຂອງອຸປະຕິເຫດເກີດຂື້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ແຂນຊັ້ນນໍາຂອງ stair ສາມາດກາຍເປັນ slippery ໃນເວລາທີ່ປຽກແລະເຖິງແມ່ນວ່າ stairs ພາຍໃນສາມາດກາຍເປັນ slippery ໃນໄລຍະຝົນຕົກເປັນປະຊາຊົນຕິດຕາມນ້ໍາພາຍໃນ. ດ້ວຍຄວາມແຂໍງແຮງສູງ Edge Grip FRP Anti Slip Stair Nosing from Monaco ຄຸນສາມາດກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂອບດ້ານເທິງຂອງບັນໄດບໍ່ລຽບງ່າຍແມ້ໃນສະພາບທີ່ອ່ອນທີ່ສຸດ. ບັນດາສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຕິດຕັ້ງໃນສະຖານະການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ, ເຂດການຄ້າແລະອຸດສາຫະກໍາ: ສະຖານີທາງລົດໄຟ, ສວນສາທາລະນະແລະສວນສາທາລະນະ, ຖ້ໍາ, ໂຮງຮຽນອຸດສາຫະກໍາ, ໄຟໄຫມ້, ທໍ່ນ້ໍາມັນຝາ Ports ຂອບຂອງພວກເຮົາຝາພັບ FRP Anti Slip Stair Nosing ມາໃນຫມູ່ຄະນະ fiberglass ທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງທີ່ສຸດທົນທານແລະ silicone carbon grit top finish ໃຫ້ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງ. ພວກເຮົາສະເຫນີສອງແຜ່ນທີ່ທົນທານຕໍ່ແຜ່ນ, ຫນຶ່ງຝາແສງສະຫວ່າງສໍາລັບສະຖານະການພາຍໃນແລະອື່ນໆທີ່ຫນັກທີ່ສຸດສໍາລັບການນໍາໃຊ້ພາຍນອກ. ເກີບແຂນ FRP Anti Slip Stage Nosing ມີການລະເມີດລິຂະສິດທີ່ມີຄວາມຫມາຍວ່າມັນສາມາດຕິດຕັ້ງເກືອບທຸກປະເພດຂອງຂັ້ນຕອນໂດຍບໍ່ຕ້ອງສ້າງອັນຕະລາຍການເດີນທາງເຮັດໃຫ້ມັນເປັນບ່ອນທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດ.
အဆိုပါထွ-1 လျှပ်စစ်လိုင်း 25cm width လျှင်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးထိုင်ခုံစင်တီမီတာ 25.5-26.0 = ရဖို့ကိုပြင်ဆင်ရမည်။
အဆိုပါထွ-2 ထိုဆန်ခါအကျယ် 30cm ၌တည်၏။ ရန်။ = ယင်းမျောပါခြင်းမှာအဘို့အ 30.5-31.0 စင်တီမီတာကိုပြင်ဆင်ပြီ။
စားပွဲပေါ်မှာ cut-off အစွန်းဆုံးဖြတ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ Glass ကို Fiber ခြစ် FRP ခြစ် 4-side-ပိတ်-End များအတွက်ဒီဇိုင်းဖြတ်တောက်ခြင်း။
FRP ဆန်ခါမဆိုအရွယ်အစားမှာအဖြတ်ခံရနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးအက်ကွဲကို stem အဓိပ်ပါယျမရှိသောဖြစ်ပေါ်စေဖို့ဒီဇိုင်းမဟုတ်လျှင် fit မှဖြတ်တောက်ပြီးနောက်စံ 1.5×4 မီတာအကြီးစားစာရွက်များ။ တစ်ခုဖွင့်လှစ်အစွန်းတူ သငျသညျအစွန်းကို turn off ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါ။ ပထမဦးဆုံးမိန့်၏ပိတ်ပွဲနှင့်နှိုင်းယှဉ်ဇယား။
Method ကို YouTube ကို-VDO ဖြတ်တောက်ခြင်းဖိုင်ဘာဖန် / Frp ခြစ်ဆန်ခါဆန်ခါဖြတ်ဖို့ကိုဘယ်လို။
11 မျက်နှာကျက် Trellis အရိပ်ကင်မြင်ကွင်းတစ်ခုမျက်နှာကျက်ကုလားကာမြို့ရိုးကို။အဆိုပါ bulkhead partition ကိုလှည့်ပတ်ခြံစည်းရိုး။ Awnings, မျက်စိကန်း slat
www.CHANCON.co.th လျ: 02 4510780-1 #Grating ကျွမ်းကျင်သူအထူးကု : 081 9327894 လိုင်း ID: iChancon GFRP Composite သံမဏိ Gully Scupper သည့်ကားလမ်းခြစ်ကင်, Culvert ပြွန်တုတ်ကျင်း သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းမြောင်းပြီးပုံသွင်းလွယ်သံ Manhole Grid Catch အင်တုံမျက်နှာဖုံးများပစ်ချအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး Expanded ။ သတ္တုအကြီးစားတာဝန်ဆုပ်ကိုင် Struts Channel ကိုဆန်ခါ , Access ကိုကြမ်းပြင်လူသွားစင်္ကြပလက်ဖောင်းပေါ်မှပေါက်ဖွားလာသူဖောက်ထား Air ကိုစီးဆင်းမှုလူမီနီယံကင်, Yard လွှတ်ဆင်းလမ်း Edging အောကျခံခုံ, ကာဗွန် serrated ဘားသံမဏိ, ကုန်းနှီး Clip သော့ခတ်ညှပ် Fastener ကျောက်ဆူး mounting ဘားဆန်ခါ panel ကိုကင်, Formworks Tie လှံတံ mounting သော့ခတ်သံမဏိ။ တောင်ပံ Nut, ဦးထုပ်ကျဇယားတွေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်, အအကြံပေးအဖွဲ့ရဲ့ Holger Hansen ဦးပိုင်, ဦးထုပ်ယိုစီးမှုသည်းခြေ encrusted ဦးထုပ်အဖုံးပိုက်ရေကန် filter ကိုချွတ်စာရွက်များသံ, ပိုက်ထုပ်အမျှင်ဓာတ်ပေါင်းစပ်စေး, အဖုံးကိုသွန်းလေ၏။ ပြန်ကြားရေး Raceway ပတ်ပတ်လည်ဦးထုပ် – စတုဂံ, ဘိလပ်မြေ, သံမဏိကွန်ကရစ်အားဖြည့်, ရေဆိုးစုဆောင်းခြင်းကုသမှုအတွက်အဖုံး, အဖုံးကိုချက်ချင်းဖြတ်ဖို့ left; ဂရိတ်အရသာ, ဆန်ခါ, အကင်ပန်းကန်သံမဏိ-welded ဖုံးလွှမ်းချော, ဘောင်ကင်သစ်ပင်အဖုံး၏အခြေစိုက်စခန်းကာကွယ်ပေးသည်, နှာခေါင်းအစွန်းတိဖုံး panel ကိုလှေကားချောလမ်းကြောင်းလှံတံရွှေ့ပြောင်းခံရသည့်လမ်းဘေးရဲ့အစွန်းတစ်လျှောက်တွင်ဦးရေနုတ်မြောင်းမြောင်း, matrix ကိုပျက်ကွက်။ ပျဉ်ပြား, အပေါက်တွေ, ရေ, သံမဏိဝါယာကြိုး, မျက်ရည်နှင့်တကွဝါယာကြိုးကွက်, ဝါယာကြိုးကွက်, jig အပေါက်, ဆန့်သံမဏိ, ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ, texture trotters, ကြက်သား, မိုးရေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်ခေါက်, စလစ်, သံလမ်း, mini ကိုခြင်းတောင်းအရှိန်မြှ။ ကောင်းစွာအနံ့, ပိတ်ပင်တားဆီးမှုခင်းလမ်း။ ယင်းအပြင်ပန်းတွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကို install လုပ်ရန်လွယ်ကူ DIY, အလှဆင် Koi ကန်, Landscaping, ကြွေပြား, အခင်း, ပစ္စည်းကိရိယာများအဆင့်မြှင့်, မီးခွက်, မြို့ရိုးပေါ်မှာဇယားကွက်မျက်နှာကြက်ကို T-bar ကို, မျက်နှာကျက် tile ကိုပုံစံ, မြို့ရိုးအလငျးကိုကုလားကာတပ်ဆင်ထားသည်။ ပြောင်လက်တောက်ပသောအလင်း ခြံစည်းရိုး panel ကအခန်းတစ်ခန်း Divide partition ကို။ utility အလှဆင်မျက်နှာကျက်မြတ်သောအပတ္တာ slat လိုက်ကာ Fiat အာရဇ်ပင် pergola ညေ, အကာအကွယ်ကွက်အဖုံးငှက်, မြွေ, ငှက်, ရှဉ့်နှင်ထုတ်ခြင်းနှောက်ခြောက်ခေါင်း, partition ကိုပြားစညျးဝေးပှဲ။ မွေ့လျော်, polycarbonate, ဗီနိုင်း, ရုံးပိတ်ပင်တားဆီးမှု, ရုံး, ရေချိုးခန်း, လေအေးပေးစက်စနစ်, ဝါယာကြိုးတစ်ဦးကအခန်း Divide, High-grade ကိုပယ်ပြီး frosted ။ Deeside ထိုက်တန်မိတ်ဖက်အဆောက်အဦ, လေဝင်လေထွက်ကင်မျက်နှာကျက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, Splashboard ဆိုင်းငံ့ / Weatherboard / Slat လိုက်ကာ / Trellis အရိပ်, အမှတ်တရ Panel များနေကာ, အရောင်အသွေးစုံသောအထွေထွေ Sun က Screen ကို Partition ခွဲ, Anti-Bird ကိုထိန်းချုပ်ရေးခွငျထော, Mini ကိုအလှဆင်ခြစ်ကုလားကာ, ပန်းပုဇယားကွက်အဖုံးဆဲလ်ဖွင့်လှစ်။ မျက်နှာကျက်လျှောက်လွှာ: ရုံးခန်းနေရာများ, အစည်းအဝေးအခန်းတစ်ခန်း , စူပါမားကတ်, ကျောင်း, စင်္ကြံ, အိမ်သာ, ဆေးရုံ, re-အလှဆင်အကျင့်ကိုကျင့်, ကုလားကာနံရံမျက်နှာကျက်အုပ်ကြွပ်။ အဆိုပါ bulkhead partition ကိုလှည့်ပတ်ခြံစည်းရိုး။ အသားတင်မြတ်သော slat လိုက်ကာ ခေါက်မျက်နှာစာ Ivy မြို့ရိုး, ပြား hinged, မျက်စိကန်းအလင်းကိုအတားအဆီးအလငျးကိုပိတ်ဆို့ခြင်းကင်မျက်နှာဖုံးလုပ်ကွက် slat ။ Weir အဆိုပါလမ်းဘေးရဲ့အစွန်းမှာရေထဲမှာမျောကင်ဖြီးထောင်ချောက်အပျက်အစီးများခွဲ။ အနည်အနှစ်များထောင်ချောက်ဖုန်မှုန့်, အရွက်, စက္ကူ, စားသောက်ကုန်စွန့်ပစ်သည့်ကင်ရေကိုထိန်းချုပ်ရန်။ အဆိုပါလမ်းဘေးတစ်လျှောက်တွင်ဘေးထွက်သံလမ်း, မြှို့နယ်၏စံသတ်မှတ်ချက်အရသိရသည်။ ပြည်သူ့လုပ်ငန်းဌာနနှင့်မြို့စီမံကိန်း ကျေးလက်လမ်းများဦးစီးဌာန အမျိုးသားအိမ်ရာအာဏာပိုင် ETA, တုတ်ကျင်းအင်တုံဖုန်မျက်နှာပြင်သည့်ကားလမ်းဘက် scupper အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများ၏ဘေးထွက်တစ်လျှောက်တွင်အရွက်ထောင်ချောက်ဆင်လုံခြုံ scupper ရေနုတ်မြောင်းအသွားအလာခြစ်, traffic ကိုလမ်းလမ်းမကြီးဆန်ခါရေနုတ်မြောင်း ပလပ်စတစ်မြေပြင်ဖုံး Raceway သံ, PP PVC PE ကို ABS ရေကူးပလတ်စတစ်ဆန်ခါအထူးပြု , ဖန်၏အစားထိုးပြား။ မျက်နှာဖုံးစျေးဆိုင်, အဆောက်အဦးများ, မြို့ရိုး, အပြင်ပန်းဝတ်, အခင်းစာရွက်များကျေးရွာအုပ်စု။ ခြေလျင်ခင်း, အပေါ်ကိုခါးပတ်ကနေသဟဇာတထုတ်ကုန်လမ်းခင်းများနှင့်ဒေသခံပန်းခြံများမြှင့်တင်ရန်။ ခရိုင်ကျန်းမာရေးလျှပ်စစ်လယ်စင်မြင့်ရှိုးများ, ပြိုင်ပွဲ, မြက်ပင်လုပ်ကွက်, ပန်းကန်, အလှဆင်မြို့ရိုးအပြား, အပြင်ပန်းလိုက်ကာ, မျက်နှာကျက်, မြို့ရိုး, eaves, gabled ရှေ့မုတ် Calais Partition ခွဲတံခါးများယုဒလူရဲ့အစောင်းများနှင့်ဖယောင်းစက္ကူစာရွက်အရွယ်အစား stairs ။ ပလပ်စတစ် coated ဝါယာကြိုး ကနေရှေးခယျြဖို့ဒီဇိုင်းများ ဖြတ်ခြင်းနှင့်အပိုဆောင်းအလှဆင်ပရိဘောဂ, နံရံဟာဖယောင်းစက္ကူနိုင်ပါတယ်ဖယောင်းစက္ကူအလှဆင်လှပထူးခြားသောနေရာများတွင်ပါဝင်သည်။ လူမီနီယမ်ဖွဲ့စည်းမှု, ဖွဲ့စည်းမှု, အက်ဖ် RP, ခံနိုင်ရည်ချေး, သံချေး, အပူ, အလင်း, အက်ဆစ်, အယ်ကာလီ, ဓာတုပစ္စည်း, စွမ်းအင်ချွေတာရေးမရှိဖော non-အဆိပ်မဟုတ်သောမီးနှောင့်နှေး, ဖိုက်ဘာမှန်သို့မဟုတ်ဖိုက်ဘာမှန်အထူး။ အခင်း, ပစ္စည်းများ, မျက်နှာပြင် Coates, epoxy, အီးလွယ်ကူ Pot, လြယ္ကူ Pot, အခင်းက c အီး, epoxy, polyurethane, PVC ပြုပြင်အဘယ်သို့ Fibergrate, Strongwell, Webforge ။ , ကော်, ဇီဝ, ဇီဝ, PU ကွန်ကရစ်, အပေါ်ယံပိုင်း, ကြောကျခဲခက်, PE မျက်နှာပြင်, စက်မှု, ဟိုတယ်, မီးဖိုချောင်, glaze နာရီ။ ဓာတုယဉ်, acrylic ဆေးသုတ်, ပြုပြင်ခြင်း, ပိတျထားသော crack, အပေါ်ယံပိုင်း, ရေစိုခံတာ, ကုန်းပတ်, ရေကူးကန်ဓာတုပစ္စည်းမြောင်းဖိုင်ဘာဖန်, အိမ်ခေါင်မိုးစာရွက်သတ္တုအခြားရွေးချယ်စရာပစ္စည်းများ, သံမဏိ, ကျောက်, သစ်သား, အတုအလင်း။ , wpc ပလပ်စတစ်, ဇီဝ, ပြန်လည်, ပစ္စည်းကိရိယာများ, Fla ရေနုတ်မြောင်း, အိမ်ခေါင်မိုးရေနုတ်မြောင်း, မျက်နှာပြင် wear, သက်ရောက်မှု, အင်ဂျင်တောင်ပေါ်ပတ်လည်ရှိရေကူးကန်, စာရွက်များ, Shutter, စာရွက်ရော်ဘာကြမ်းပြင်ဖုံးရဲ့အစွန်းန်းကျင်မြောင်းလျတ်။ , pallets, လုပ်လေ၏စင်ပေါ်, ကြမ်းပြင်, အဆောက်အဦးများ, ဘလောက်စာမျက်နှာများတွင်။ အလှဆင်မြက်လမ်းခင်းအဆိုပါလုပ်ကွက်ကိုလက်စသတ်။ Modify Feng Shui GFRP Composite စိန်ထိပ်တန်း Manhole Checker ပြားမျက်နှာဖုံးများ (မျက်နှာပြင် ရေတွင်းပိုက်ဖိုင်ဘာဖန်အဖုံးစလစ်ထုပ်။ အဆိုပါယင်ကောင်၏အရွယ်အစား) အထူးကု Solutions ဆန်ခါ www.chancon.co.th နှင့်မည်သို့ဖြတ်ဖို့ installation: အဆောက်အဦးအပြင်က Round Manhole မျက်နှာဖုံးများ, ရင်ပြင်, Rectangle, စက်ဝိုင်းမြို့ပတ်, ရိုးရှင်းသော Culvert Gully, Tile မြှောင်ဆဲလ်မျက်နှာကျက်ခြစ်, Pass ကိုလမ်းမြေအောက်ခန်းလမ်းဘေးလုပ်ကြံ။ Manhole, ချိတ်ပိတ်, ပလပ်စတစ်ဇယားကွက်ခင်း, လက်အပေါက် LIFT Lifter ထွက်ကိုရှင်းလင်း, အင်တုံ, လူနေထိုင်ရာတုတ်ကျင်း သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းဆဲလ်ဖမ်း, ခြံဝင်းသို့ဝင်ကြမ်းပြင်ပန်းရေချိုးခန်းယိုစီးခြစ်, အပ်ချုပ်သူ, စီးပွားရေးကျဆင်းမှုဖုံး, ပိတျဆို့နတေဲ့ပိုက်ပြီးပုံသွင်းလွယ် Grey ကသံ Casting, အစားထိုးသံမဏိ, Wood ကသစ် WPC ။ ဖိုင်ဘာဘိလပ်မြေ, Checker ဘဲပန်းကန်, Fittings ပိုးဧရိယာ, အကျင့်, ချေးခုခံ frame ကိုအစားထိုး, သန့်ရှင်း, ပေါက် box ကိုဖယ်ရှားခြင်း, ပိတ်ပင်တားဆီးမှုပန်းရံခင်းယူနစ်, ပန်းကန် drainer, Channel ကိုဖောက်တံ, သင်္ဘော, လေဝင်လေထွက် Valve, Filter ကို, ရေကူးကန်, စုပ်စက်, သင်္ဘော, ,. ရာဇမတ်ကွက်, မိုးသေနတ်သမားရေအမှိုက်ပုံးထဲထိန်သိမ်း , ဥသေတ္တာကင်ပျံ့ Divide အလင်းရောင် Aquarium Panel ကို, ဆန်ခါအလငျးသေတ္တာအဖုံးခွဲခြား။ အဆိုပါ ထောင့်ကွက်ငါး EggCrate အလင်းပြန်မှုမျက်နှာကျက်အသားကင်အလင်းပေးခြင်းမျက်နှာပြင် Filter ကိုမီဒီယာအလှဆင် ပျံ့ Panel ကို, DIY Abstract ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းဘုတ်အဖွဲ့ရေကန်အဏ္ဏဝါ Aquarium, HVAC လေကြောင်းအားနည်းချက်ကို acrylic ပြန်လာ / နှစ်ချက် deflecton နဲ Grid Louver, terrarium vivarium ကွာဟမှုအလင်းပိတ်ဆို့ခြင်းများအတွက် panel ကိုဇယားကွက်အတွက်။ LED မီးခွက်သည် / ချောင်းစိန့် အဆိုပါ panel ကိုကုလားကာမြို့ရိုးအပြား (/ အလင်းပြန်မှုဦးဆောင်), မျက်နှာကျက် slat လိုက်ကာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအဲယားဝေး။ လေဝင်လေထွက် louver ပြား အဖုံးအဆောက်အဦးဆင်ယင်ခြယ်သလျှပ်စစ်အလုပ်ထိတွေ့။ Kagnbag အလှဆင်ပြားတခုအဖြစ်။ မျက်နှာကျက်လူမီနီယံလေဝင်လေထွက်အစားထိုးပါ။ ငါးဘို့အလှဆင်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ဦးက panel ကအခန်းတစ်ခန်း Divide မြို့ရိုးကိုဖွဲ့စည်းပုံသင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့ box ကိုကွန်တိန်နာ, ငါးသားဖောက်, ပုစွန်, ဖား, ပုတ်သင် FRP ထုတ်ကုန်များ, GFRPS, Glass ကို Fiber စစ်ကူ သံဘောင်များကို Polymer အမျိုးအစား, စစ်ကူဖန်မျှင်ထည်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ, Composite အဆောက်အဦးပစ္စည်းများ, ဗီနိုင်း Ester စေး, အမြစ်ပင်စည် bollards ပင်သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့။ အလှဆင်အတွက်လမ်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုပန်းပု, Landscaping ပြင်ပ ဥယျာဉ်ကြီးသစ်ပင်ခြစ်, welded bearing bar ကိုဝင်းခြစ်ဖုံးအုပ် Tree Ring ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစောင့်တပ်ဖွဲ့ခြစ် Paver Frame ကဖုံးလမ်းသွားလမ်းလာ, လမ်းမလမ်း, ပုံသွင်း, pultrusion, pultuded profile များကို, ကေ့လှေကား, လှေကားအုံနင်းမဟုတ်သောဆန့်ကျင် nosing ။ နှစ်စီးမတော်တဆဖြစ်လှေကား, ကျယ်ပြန့်ခြေလှမ်း, နင်းချော် ရှေ့လျှောက်လမ်းပေါ်မှာအဘို့အဖုံးများ, Handrail, အခြေခံအဆောက်အဦးပုံသွင်း, စံပြနှစ်ချက်ကားဂိုဒေါင်အခင်း, ပလက်ဖောင်း, တုတ်ကျင်းအဖုံးများ, မြောင်း, မျိုးတွင်, ဝတ်ဖန်သားပြင်, မီဒီယာထောက်ခံမှု, လေကွက်, လက်ရန်း, လမ်းလျှောက်လမ်း, multi ဇယားကွက်, ဖုံးလွှမ်းကြ၏။ , ခွက်, gritted, minimesh, သစ်ရွက် polyester စေး။ , Palette Partition ခွဲတံခါးပေါက်ကို Windows, စစ်ဆင်ရေးပလက်ဖောင်း , ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်အထောက်အထားကြမ်းပြင်, နယူးစိတ်ကူးဆန်းသစ်တီထွင်ဒီဇိုင်းဆက်စပ်ပစ္စည်း, Components, ဗိသုကာနှင့်စက်မှုကုန်းပတ်, လမ်းသွားလမ်းလာ Bridges စနစ်, တန်တိုင်း dock ကိုတံခါးခုံ, ခြံစည်းရိုး, ပတ်ပတ်လည်ပြွန်, ပိုက်စာရွက်များ, ထောင့်, ဝါယာကြိုးကွက်, မြေတွင်း, sump ။ , အပေါ်ယံပိုင်း, Polyurethane ကွန်ကရစ်, ပိုလန်, Epoxy မိမိကိုယ်ကို level, ကြမ်းပြင်နံရံ, ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ, ကြမ်းပြင်ခိုင်မာစေ, grouting ရေစိုခံ, ရေဆိုးကုသမှုစိုစွတ်အအေးခံမျှော်စင်, ကော်လံ, လျတ်, လမိုင်း, သတ္တု, လူမီနီယမ်ဖွဲ့စည်းမှု, သိမ်းတန်း, စပယ်ယာ, လသာပေါက်ဆောက်လုပ်ရေး, polycarbonate ။ , ပလပ်စတစ်, acrylic, UPVC, ABS , PS, PC မှာ, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထည်အားဖြင့်မိန့်ထားထူးခြားဆန်းပြားပေ ,, ပြားစာရွက်များ, စ, ဆန့်ကျင်ခရမ်းလွန်တည်ငြိမ်, အလှဆင်အစိုင်အခဲစာရွက်များ, မြောင်း, မြောင်း, ရေပူ Dip Electroforge အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး, ကြေးဝါ, ဇင့်။ , ထောက်ပံ့ရေး, စားနပ်ရိက္ခာအဆင့်ရောင်းဝယ်ရေး, စက်မှု , ပေးသွင်း, Foundry, တရုတ်, GMP, HACCP, ISO ကို 1400, 900 အတွက်ဖန်ဆင်း, FDA က, သတ်မှတ်ချက်တွင် Approved, စျေးနှုန်း, Infosoft FRP Flexible ခြစ် Features: အလင်းအလေးချိန်, အကြမ်းခံပိုမိုမြင့်မား strengt •။ အလွယ်တကူဇ, installation နဲ့ပြင်၏အလုပ်, ဖြတ်, အတိုင် crack သို့မဟုတ်အုပ်စုခွဲမဟုတ်• site ပေါ်တွင်တူး, ချေးများနှင့်ရာသီဥတုကိုခံနိုင်ရည် (ခရမ်းလွန်ခံနိုင်ရည်), အရှိဆုံးဓာတုပစ္စည်းခုခံအပူသို့မဟုတ်လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကိုလည်း (High အပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည်) ကိုကေဘယ်ကြိုးတွေကိုကာကွယ်ပေးသည်လုပ်ဆောင်သွားရန်မနေပါနဲ့•။ , •ဆက်ပြောသည်မီးနှောင့်နှေးကာကွယ်မှုကိုပေးသနားကာကွယ်ပေးနိုင် ပြင်ပမီး (ကိုယ်ပိုင်ငြိမ်းအေး) CHANCON ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်း / ၏အမှု၌အကြိုးတွေမှ ထုတ်ကုန် Chantilly, Chantilly, Connecticut Connecticut အထူးပြုထုတ်လုပ်သူ။ ရေနုတ်မြောင်းစနစ်များကင်အဖုံး အဆိုပါဆန်ခါထောင်ချောက်စွန့်ပစ်အတူကြမ်းပြင် Mat စင်္ကြံစောက် footpath ။ လှေကားထိန်သိမ်း ပေါ့ပါး elevated ပြား, သန့်ရှင်းစေဖို့အတွက်ရေကန်အဖုံးဖုံး manholes ချွတ်ပိုက်ထုပ် ထောင်ဝင်းထဲမှာ utility ထုတ်လုပ်မှုပြား အဆိုပါကဏန်း pad ပါစက်တွေ သံချေးများနှင့်ချေးကာကွယ်မှုဓာတုပစ္စည်းများမှမိလ္လာစနစ်ကအထက်စာရွက်နေသောလူသွားလမ်း။ အဆိုပါကင်ကိုဖုံးလွှမ်းခြင်းနှင့်အဆင်သင့်လုပ်ရေကန် / ခြစ်အထူးကု (5 ဆန်ခါ,2ရေတွင်းများကိုဖုံးလွှမ်း) 1 PP / ကို ABS ရေကူးရေကန်လျတ် ဆန်ခါ ရေကန်ပတျဝနျးကငျြလျတ်ဆန်ခါ။ ပလပ်စတစ် Grid2စံ width ကို 25cm နှင့်အတူ PP / ကို ABS ။ ပြီးတော့ 30 စင်တီမီတာ။ ပေါ့ပါးအသုံးပြုရန်နှစ်ခုရဲ့အရည်အသွေးအဆင့်ရှိပါတယ်, သံချေးမ, ဒါပေမယ့်အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်ခဲ့သည်။ နေရောင်ကိုတက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် အဆိုပါပြဿနာသည် frame ခွဲထားပါတယ် စျေးအသက်သာဆုံး အိမ်တွင်းအသုံးပြုရန်သင့်လျော်သော ရေကန်ပတ်ပတ်လည် အဘယ်မှာရှိကားတစ်စီး Chase တစ်ကွေးဘဲဥပုံ၏အသုံးပြုမှုမှတဆင့်မရှိ 2. PVC / PP / PE ပလတ်စတစ်ဆန်ခါပလပ်စတစ်ကင်ကိုလက်စသတ်။2အပြည့်အဝအရွယ်အစား 25x100cm နှင့်အတူပလပ်စတစ် PVC / PP / PE mesh ။ ပြီးတော့ 30x100cm ။ ပေါ့ပါးဝန်မှတဆင့်လမ်းလျှောက်ဖို့လူတို့အဘို့ကောင်း၏။ နေရောင်သို့မဟုတ်ဓာတုပစ္စည်းမကြာခဏပါ။ အဲဒီမှာရှုမြင်သုံးသပ်ကြခဲ့ကြပေမည် သံမဏိထက်စျေးနှုန်းချိုသာ စက်ရုံ 3. HDG န်းကျင်အိမ်တွင်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဥယျာဉ်တန်းမှာ Koi ရေကန်ကွန်ဒိုအိမ်ရာအဘို့သင့်လျော်သော။ သွပ်ရည်စိမ်ရဲ့ချော plating ကင် welded သံမဏိဆန်ခါသံမဏိ။ ဆန်ခါသံမဏိပူသို့ကျဆင်းလာဟော့ Dip သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိစာရွက်များသည်။ အဆိုပါ interface ကို CO2 စက်ရုပ်တွေနဲ့သဟဇာတဖြစ်သံမဏိအတူတူကိုပိုပြီးတင်းတင်းကျပ်ကျပ်နှင့်ဆက်စပ်လက်၌အရည်ပျော်ပြီးတော့ပိုမိုမြင့်မားတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိပစ္စည်း HDG အားသာချက်ချထားတဲ့စေသည်။ အဆိုပါအားနည်းချက် rusting ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါခိုးယူအရွယ်အစား 25x100cm ။ ပြီးတော့ 30x100cm ။ 4. FRP ဖန်မျှင်ထည်ကင် / ခြစ် ။ Glass ကိုဖိုင်ဘာဇယားကွက်-အားဖြည့်ပေါင်းစပ်စေး “ဆန်ခါ FRP” အစားထိုးကင်, သံမဏိ / လူမီနီယံ။ ပေါ့ပါးဖိုင်ဘာပေါင်းစပ်စေးကနေဖန်ဆင်းတော်မြင့်မားတဲ့အစွမ်းသတ္တိကိုဓာတုဗေဒခံနိုင်ရည်, သံချေးခံနိုင်ရည်, ခရမ်းလွန်နေရောင်ခြည် corrode ပါဘူးရှိပါတယ်။ သူခိုးမလိုချင်ကြဘူး လြယ္ကူကို Maintenance 50-100 နှစ်ပေါင်း၏အသုံးဝင်သောဘဝ, ရှေးခယျြမှု၏ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်အဖြစ်ကြမ်းပြင်မှအရောင်ကိုရွေးချယ်ပါ။ စံစာရွက်အရွယ်အစား 1.5x4M ။ သင့်တော်မြင့်မားသောပြား။ တစ်ခုသို့မဟုတ်လမ်းဘေးထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းအနားမှာစွန့်ပစ်ထောင်ချောက်ဆန်ခါ 3-5 နှစ်ကအာမခံ 5. ကျဇယားဘေးထွက်ယိုစီးခြစ်များအတွက်ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီမည်သည့်အရွယ်အစားမှာအမိန့်ချမှတ်နိုင်ပါသည်။ (ကျဇယားသံ Casting) သွန်းသံ, ကျဇယားကနေဖန်ဆင်းတော်ဝတ်ပြုဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ Split ကိုဆန်ခါထောင်ချောက်အပျက်အစီးများထောင်ချောက်အဆိုပါလမ်းဘေးတလျှောက်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းခြမ်းထွက်ခွာမည်။ မြူနီစီပယ်ခြင်းအားဖြင့် ပြည်သူ့လုပ်ငန်းဌာနနှင့်မြို့စီမံကိန်း ကျေးလက်လမ်းနှင့်ဘန်ကောက်စံအရွယ်အစား 10x40cm ဖြစ်ကြသည်။ 15x30cm ။ , 15x40cm ။ , 20x57cm ။ ပြီးတော့ 25x50cm ။ 6. ကျဇယား Cast ကိုသံ Manhole Cover ဦးထုပ်ပြီးပုံသွင်းလွယ်သံကိုသွန်းလေ၏။ ကျဇယား၏ဖန်ဆင်းထိုင်းနိုင်ငံအတွက် certified ရရှိထားပြီးအဖွဲ့အစည်းများထံမှစံ EN124 စမ်းသပ်မှုရလဒ်များအရသိရသည်ထုတ်လုပ် (ကျဇယားသံ Cast သုံးရန်) သံကိုသွန်းလေ၏။ 2-40 တန်ချိန်နှစ်ဦးစလုံးဗားရှင်းပတ္ရှိသည်နှင့်ခိုးမှုကာကွယ်တားဆီးဖို့သော့ခတ်တော်တော်များများရဲ့အရည်အသွေးအဆင့်အနေဖြင့်ရွေးချယ်ပါ။ installation ပြီးလွယ်ကူပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစျေးနှုန်း 1 set ကိုဖိုက်ဘာမှန်ဘောင်နှင့်အတူအားဖြည့်သည် frame 7. FRP Manhole Cover အဖုံး manholes နှင့်ဦးထုပ်များပါဝင်သည်။ ဖိုင်ဘာနဲ့လုပ်ထားတဲ့ပလပ်စတစ် FRP စံ EN124 သွန်းသံ, ကျဇယားအစှမျးသတ်တိနဲ့တူသံချေးမရအားဖြည့်။ လှလှပပသဘောသဘာဝနှင့်အတူ 2-40 တန်ချိန်ကနေရွေးချယ်ပါ။ ယခင်အငြင်းပွားဖွယ်မရှိခိုးယူ 8. Screen ကို Partition ခွဲ Panel များကုလားကာမြို့ရိုးကိုခွငျထော Anti-Bird ကိုဝယ်ခြင်းငှါဈေးကွက်ထဲမှာလူကြိုက်များမဟုတ်ပါဘူး။ Bulkhead partition ကို Awnings, trellises, ရာဇမတ်ကွက် ဗိသုကာကျွမ်းကျင်သူများအားဖြင့်ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်း။ အလှဆင်စက်ရုံဂိုဒေါင်, ရုံးအဆောက်အဦ, ဗိသုကာ, ဒီဇိုင်းအနံ့သည်။ monotonous မဟုတ် လျှောက်လွှာ partition ကိုအတွင်းပိုင်းနှင့်အပြင်ပန်းနှစ်ဦးစလုံးအပေါ်တစ်ဦးခိုင်ခံ့သောလူနေအိမ်ဒေသများသို့ဧရိယာနေရောင်, မိုးရွာရွာ, နေရောင်လိုက်ကာကိုဆီးတားခြင်း, အဘို့သစ်သား battens GRP / FRP / ဖန်မျှင်ထည် / Composite များအတွက်အလင်းအလေးချိန်အစားထိုး ခြစ်ခြင်းနှင့် Manhole မျက်နှာဖုံးများ ပစ္စည်းများနည်းပညာ။ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းဖိုင်ဘာပေါင်းစပ် resins ၏အဆင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသွန်းသံထက်ပိုမိုပေါ့ပါးပါပြီ, သံချေး corrode မထားဘူး။ သူခိုးတွေလုံးဝကောင်းသောအနံ့တားဆီးဖုံးချင်ကြဘူး။ လိုအပ်သကဲ့သို့မျက်နှာပြင်ကိုက်ညီရန်အရောင်ကိုရွေးချယ်ပါ။ ။ အိမ်ခြံမြေဇယားကွက် FRP (ဖန်မျှင်ထည် + ဗဓေလသစ်) .vs များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ သံမဏိ .vs ။ ပလတ်စတစ် (PE / ကို ABS / PVC) 1 အဘယ်သူမျှမသံချေး, အဘယ်သူမျှမချေးမရှိ frames များကိုအပူနှင့်ထိုကဲ့သို့သောဓာတုပစ္စည်းထံမှချေးဖို့ခံနိုင်ရည်ခရမ်းလွန်အလင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်။ စသည်တို့ကို Caustic soda, Borax, ဆာလဖျူရစ်အက်ဆစ်, အသုံးပြုမှု, ပင်လယ်အနီးဓာတုပစ္စည်းထိတွေ့၏ဥပမာကြိမ်နှုန်းပေါ် မူတည်. အပူချိန်နှင့် 50 နှစ်ကျော်၏ဓာတုခံနိုင်ရည်စားပွဲပေါ်မှာစမ်းသပ် 2. သက်တမ်းစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ သို့မဟုတ်မြင့်မားသောအပူချိန်ဖြစ်သည်။ (သံချေး၏ချေး၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးဖို့ကိုဘယ်လို။ ထိထိရောက်ရောက်) 3. သန့်စင်စက်ရုံ။ ယင်း၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ကိုက်ညီရန်အရောင်ကိုရွေးချယ်ပါ။ Non-ကူးမှု dielectric မီဒီယာလျှပ်စီးမဟုတ်ပါ: ဒါမှမဟုတ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဇုန်အဖြစ်, အထူးသထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကို, အဝါရောင်အပြာ, မီးခိုးရောင်, အနက်ရောင်, အစိမ်းလျှပ်စစ်အပူအသံကာကွယ်မှုပစ္စည်းအဖြစ်အရောင်ကို အသုံးပြု. ။ သံမဏိထက်ပိုမိုပေါ့ပါးလျှပ်စစ်ရှော့ခ်တားဆီးရန်အတွက်4။ ဒါပေမဲ့ High-အစွမ်းသတ္တိကိုသံမဏိနဲ့မတူပဲ။ ရွေ့လျား၏ရလဒ်အဖြစ် installation နဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမြန်ဆန်လွယ်ကူသွန်းသံများ၏စျေးနှုန်း 5. ။ ပိုမိုမြင့်မားသောသံမဏိ FRP ရဲ့ Galvanizing, ဒါပေမယ့်အခိုးခံရဘူး။ ပညတ္တိကျမ်းဈေးကွက်ထဲမှာရောင်းပါဘူးအဟောင်းခရမ်းလွန်ခံနိုင်ရည်စည်းလုံးအစွမ်းသတ္တိကိုပေါ့ပါးသံမဏိဖြတ်မြင့်မားတဲ့ resolution နဲ့တစ်ဦး 6. Fiber texture နဲ့တူ fit မှ, နေရောင်ခြည်၏အက်ကွဲ corrode ပါဘူးပေါ့။ လုံးဝတင်းကျပ်စွာပိတ်ထား က virtual အပေါ်တစ်ဦးကရော်ဘာတံဆိပ်ခတ် ကာကွယ်ရေး, အနံ့ကောင်းသော အဘယ်သူမျှမထိကပေါက် အသံတိတ်ကားကိုထိပ်မျက်နှာပြင်ကျော်သို့ပွေးလေ၏အခါ။ Dielectric (Non-ကူးမှု) အပူနှင့်ခရမ်းလွန်အလင်းပလပ်စတစ်ဘောင်မှခံနိုင်ရည်ကို ABS တူသောအက်, PVC, Poly 3-5 နှစ်ကအာမခံနှင့်တကွ, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစံ EN124 ထူထောင်ခဲ့သည့်ဥရောပ, အမေရိက, ကနေတင်သွင်း 8. ပြား။ မော်ဒယ်နှင့်အမျိုးအစားပေါ် တစ်ဦးကိုအစားထိုးချက်ချင်း CHANCON အကယ်. : တိုက်ရိုက်စက်ရုံထဲကနေဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်သူ ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များ၏အများစုမှာတန်ဖိုး excel FRP ထုတ်ကုန်များအတွက်အင်ဂျင်နီယာ / ဗိသုကာဒီဇိုင်းကဆက်ပြောသည်။ လမ်းဆန်ခါအဆိုပါကုမ္ပဏီ Channel ကိုအကြောင်းအရာထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းချမှု FRP ခြစ်၏, ထိန်သိမ်းသံလမ်း, ရေနုတ်မြောင်း။ လမျးလြှောကျသှား သတ္တု, သံမဏိ, သံမဏိ, လူမီနီယံကြေးဝါကြေးနီ၏အစားထိုးများအတွက်ဖိုင်ဘာ (FRP), ကျဇယားသံတန်းဆောက်လုပ်ရေးအအေးသိုလှောင်မှု, မွေးမြူရေး, လယ်ယာဝက်, ကြက်ဘဲ, လှောင်အိမ်ငှက်သွပ်ရည်စိမ်မဟာမိတ်အဖွဲ့ plating သွပ် plating, သံသွန်းလေ၏။ အဆိုပါကားလမ်းခုံးကျော်တံတားကျေးလက်ဒေသလျှပ်စစ်မီးဖုန်းဦးစီးဌာနကျော်ခွေးဥမင်လိုဏ်ခေါင်း, ရေကာတာ, ဆိပ်ကမ်းဆီ, တံတားများ။ သုံးဖက်မြင်ဖွဲ့စည်းပုံမှာမြို့ရိုး, ကမ်းပါး, တောင်ကြီးတို့, လေဆိပ်မိုးမျှော်တိုက်ဗိသုကာဓာတုနှင့်သန့်စင်စက်ရုံများအတွက်တင်သောကြီးမားသော Cable ကိုတည်ဆောက်ခြင်း refinery, ကမ်းလွန်ပင်များ, ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကဏ္ဍ, ဥမင်လိုဏ်လမ်းများဌာနမှူးရုံး | လက္ကားလက်လီဝယ်လိုအားရောင်းဝယ်ရေး | ထမ်းခေါ်ယူမှုအရောင်းကိုယ်စားလှယ်ရောင်းဝယ်ရေး ,. အေးဂျင့်, ဖြန့်ဖြူး CHANCON COMPANY LIMITED www.chancon.co.th || GratingThai Co. , Ltd www.GratingThai.co.th ။ 081: 199 Soi ဘန်ခွန် Tha SMD 21/1 ဘန်ကောက်, ထိုင်းနိုင်ငံ, ဘန်ကောက်ထိုင်း #Mobile (အရောင်း) မှာ (အတိုက်အခံဗဟို Rama 2) 932 7894, 061 647 0184-6 လျ: 02 451 0780-1, ဖက်စ်: 02 451 0786 ။ E-mail ကို: mkt@chancon.co.th LINE (ID ): သိ-ဘယ်လိုဆန်ခါ iCHANCON ဝက်ဘ်ဆိုက်: http://GratingThai.com, http: // ဆန်ခါဖိုက်ဘာမှန် – ဦးထုပ်သံမဏိပိုက်ထုပ် pitting com FaceBook: ။ www ။ .facebook.com / GratingThai, www.facebook.com/FrpFiberGrating.chancon, www.facebook.com/FrpGrating.ManholeCover Youtube ကို : http://www.youtube.com/mktchancon, http://www.youtube.com/ ။ FRPGratingFiberglass, Http://www.youtube.com/FRPGratingManhole | TwitterShare: Https://twitter.com/GratingThai Https://plus.google.com/+ChanconThကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျကျွန်ုပ်တို့၏ပုံသွင်းထားဖန်မျှင်ထည်ခြစ် Pultruded ဖန်မျှင်ထည်ခြစ်ပြီးတော့ပွိုချေး Resistance ဂုဏ်သတ္တိများ directory ကိုပေးပါ။ , ESP သံမဏိအခင်းထုတ်ကုန်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ။ ecially အစွမ်းသတ္တိ, ရှည်သောအသက်နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုလည်းထုတ်ကုန်ဆန်ခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖိုက်ဘာမှန်၏သာလွန်အရည်အသွေးတွေဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့ရဲ့လျှပ်စစ်သည် non-ကူးမှုဂုဏ်သတ္တိများသူတို့ကိုဆန်ခါကြမ်းပြင်များအတွက်စံပြ option ကိုပါစေ။ ငါတို့ရှိသမျှသည်သင်၏အဘို့အဆန်ခါဖိုက်ဘာမှန်များစွာသောအမျိုးအစားများကိုဆက်ကပ်။ မတူညီတဲ့တင် applications များ။ ဖန်မျှင်ထည် applications များဆန်ခါအထိ ဗိသုကာနေရောင်စိစစ်ခြင်းနှင့်ဖိုက်ဘာမှန်အခင်းကနေစံဖို့အတွက် walkway နှင့်မြင့်မားသောဝန်ကိုလှိမ့ applications များရန်။ grit မျက်နှာပြင်များနှင့်စံစတော့ရှယ်ယာအရောင်များသို့မဟုတ်ထုံးစံအရောင်များသည်သင်၏ဖိုက်ဘာမှန်လျှောက်လွှာကိုက်ညီမှထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ တစ်ဖိုက်ဘာမှန်ဘို့ငါတို့ထုံးစံဗဓေလသစ်အမျိုးအစားများအနေဖြင့်ရွေးချယ်ပါ။ သင့်ရဲ့ချေး Resistance လိုအပ်တာလဲ suite ကိုက်ညီကြောင်းကိုကြမ်းခင်းကုန်ပစ္စည်း။
ပုံသွင်းထားဖန်မျှင်ထည်ခြစ် တစ်ဦးကခိုင်ခံ့, One-Piece ပုံသွင်း Panel ကိုဖွဲ့စည်းပေးရန်, ဖန်မျှင်ထည် rovings Thermosetting resins အတူများမှာပေါင်းစပ်တစ်ဦးကဖန်မျှင်ထည်-စစ်ကူပလတ်စတစ် (ထို FRP) Is ။ / 35% စေးရန်တစ်ဦးက 65% ။ ဖန်ခွက်အလေးချိန်အချိုး။ မြင့်မားတဲ့ချေးခုခံထောက်ပံ့ Meniscus မျက်နှာပြင်များသို့မဟုတ် PR grit မျက်နှာပြင်များလျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။ သံမဏိနှင့်ကြမ်းပြင်တပတ်ရစ်အခြားကြမ်းခင်းကုန်ပစ္စည်းများစေရန်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ Ovide Resistance ဖြတ်ပိုင်း။ ဒီဖန်မျှင်ထည်ခြစ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းပိုကောင်းချေးပတ်ဝန်းကျင်သည် suite သလား Is ။ Pultruded Pultruded, ဖန်မျှင်ထည်ခြစ်
Pultruded ဖန်မျှင်ထည်ခြစ် ပရီမီယံအဆင့် Isophthalic polyester အရောင်အသုံးပြုခြင်းဖန်ဆင်းသည်, ဗီနိုင်းတစ်ခု Ester အောင်သို့မဟုတ်တစ်ဦးက Synthetic Surface ကာအတူနေတဲ့ဖင်နိုလစ်ဗဓေလသစ်စနစ်များရဲ့ Add ။ ဒါကြောင့်ချေး, ခံနိုင်ရည်ပေါ့ပါးနှင့်အောင် တာရှည်ခံ။ Pultruded ဖိုက်ဘာမှန်ပုံသွင်းဖိုက်ဘာမှန်ဆန်ခါထက်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်အလေးချိန်အချိုးတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိတစ်ခု grit မျက်နှာပြင်ရှိပါတယ်။ ဖန်အချိုးတစ်ဦးက 35% / 65% ဗဓေလသစ် သာ. ကွီးမွတျအစှမျးသတ်တိနှငျ့ပုံသွင်းဖိုက်ဘာမှန်ထက်လျော့နည်းချေးခုခံပေးပါသည်။ ဆန်ခါ။ ဒီကုန်ပစ္စည်းဖန်မျှင်ထည်လင်း၏ရှည်လျားတဲ့ span သည် suite သလား သာ. ကောင်း၏။
, ဖန်မျှင်ထည်မှဖုံးအုပ်ခြစ် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျကျွန်ုပ်တို့၏ဖန်မျှင်ထည်ခြစ်, ချောမွေ့ပေါင်းစပ်တစ်ဦးက Long-တည်မြဲသော, ပုံသွင်းထားဖန်မျှင်ထည်ကြမ်းခင်းကုန်ပစ္စည်း Is grit သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဗဓေလသစ်စနစ်များရဲ့မဆိုအတူကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ် Checker ကိုစာရွက်-သတ္တုနှင့်ပုံသွင်းထားခြစ် Add ဖုံးအုပ်။ ဒါဟာကြမ်းပြင်ဆန်ခါအခါစံပြရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည် 100% က c ဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ overed ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖိုက်ဘာမှန်ဖုံးလွှမ်းဆန်ခါမကြာခဏဖြစ်ပါတယ် တစ်ဦးခိုင်, အဆငျ့မျက်နှာပြင်စံပြသည်အဘယ်မှာရှိမြင့်မားသောခြေလျင်နှင့်လှည်းယာဉ်အသွားအလာနှင့်အတူတင်နှင့်သိုလှောင်မှုဒေသများရှိကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာဆန်ခါပွင့်လင်းကွက်နှင့်၎င်း၏စံ grit-ထိပ်တန်း၏ထက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 50% ပိုမိုမြင့်မားတောင့်တင်းတန်ဖိုးများကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ အဖုံးအာမခံချက် securefux ခြေလျင်။
အဆိုပါ Bullet ခုခံတွန်းလှန်ဆက်သွယ်ပါ, ဖန်မျှင်ထည်ပြား: ။ ကြှနျုပျတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်သံမဏိ Panel ကို၏သာလွန်ပဲ့ထိန်းတပ်, Resistance မှာတစ်ဦးအလေးချိန်ထက်နည်း၏ကျွန်ုပ်တို့၏အဆိုပါကျည်ဆံကိုခံနိုင်ရည်ဖန်မျှင်ထည်စာရွက်-သတ္တုကမ်းလှမ်းချက်များ 25% ကိုဆက်သွယ်ပါသင်၏လုပ်ငန်းသည်လုပ်ငန်းသုံးလုံခြုံရေးဖန်မျှင်ထည် Applications ကိုများအတွက်အဆောက်အဦးကိုယခုရရှိနိုင်, နေအိမ်သို့မဟုတ်အစိုးရမဟုတ်သော Facility ဤဖန်မျှင်ထည်ထည့်ပါ။ Panel များတာရှည်ခံ, ချေး Resistance, လျှပ်စစ်က Non-အပြုအမူ, အနိမျ့ Thermal conduction ပြီးတော့အလင်းအလေးချိန်၏နောက်ထပ်စွမ်းဆောင်ရည်အားသာချက်များနှင့်အတူပဲ့ထိန်းတပ်, ကိုခံနိုင်ရည်လုံခြုံရေးငှေပါ။
အဆိုပါအကြီးစား Duty ,, ဖန်မျှင်ထည်ခြစ် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးစား Duty ဖန်မျှင်ထည်ခြစ်နှစ်ဦးစလုံးပုံသွင်းပြီးတော့ Pultruded ခြစ်စနစ်များရဲ့ခုနှစ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ နှင့်နှစ်ဦးစလုံးအမျိုးအစားများ၏။ ဆန်ခါမိုးသည်းထန်စွာတာဝန်ဖိုက်ဘာမှန်သယ်ဆောင်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြသည် forklift နှင့်လယ်ထွန်စက်-tray ။ ရိုးရာပုံသွင်းကြောင်း ler ဝန်နှင့် pultruded FRP ထုတ်ကုန်ဆန်ခါကိုထောကျပံ့ဖို့ဒီဇိုင်းကြသည်မဟုတ်။ အကြီးစားတာဝန်ဖိုက်ဘာမှန်ဆန်ခါအဖြစ်ကောင်းစွာပိုမိုမြင့်မားတဲ့ volume အသွားအလာဒေသများအဘို့ သာ. ကြီးမြတ်ကြာရှည်ခံမှုပေးပါသည်။ ထို့ပြင်အကြီးစား Duty ဖန်မျှင်ထည်ခြစ်ဆန်ခါရိုးရာဖိုက်ဘာမှန်ထက်အကွာအဝေးရှည်အခမဲ့ span ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဖိုက်ဘာမှန်များ, လှေခါးထစ်ကိုနင်းပြီးတော့ဖိုက်ဘာမှန်များ, လှေခါးထစ်ကိုနင်းမျက်နှာဖုံးများ အတွက်ပေါ့ပါးပြီးလွယ်ကူ, ဖန်မျှင်ထည် Install လုပ်ဖို့, နင်းလှေကားပလက်ဖောင်းများဆန်ခါရန်ဖန်မျှင်ထည်ကြမ်းပြင်ကိုက်ညီနှစ်ဦးစလုံးပုံသွင်းပြီးတော့ Pultruded အမျိုးအစားများလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ , ဖန်မျှင်ထည်, လှေကားထစ်ကိုနင်းအဖုံးအကာပုံသွင်းဖန် terrarium ထိုအချေးသည်ထိုအ Is ဒါက resins စနစ် မှစ. ထားကြပါတယ်။ သူတို့ကကွန်ကရစ်သည်တစ်ဦးကကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်သော, ဖြတ်ပိုင်း-resistant-အကာအကွယ်မျက်နှာပြင်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပေးအသုံးပြုပုံသတ္တုနှင့်သစ်သားကို select လုပ်ပါ။ အကျင့်, မီးသတ်နှောင့်နှေးပြီးတော့မဟုတ်တဲ့, ကိုခံနိုင်ရည် impact ။
, ဖန်မျှင်ထည်ခြစ် Handrails နှင့်အညီ, ဖန်မျှင်ထည်လှေကား , ဖန်မျှင်ထည်ခြစ် Handrails နှင့်အညီ, ဖန်မျှင်ထည်လှေကား, ဖန်မျှင်ထည်ပု handrail စနစ်များရဲ့ Pultruded ဖန်မျှင်ထည်အစိတ်အပိုင်းများ မှစ. လုပ်ကြံနေ။ နှင့် thermoplastic connec ပုံသွင်း tors ။ handrail စနစ်များကိုဆန်ခါကျွန်ုပ်တို့၏ modular ဖိုက်ဘာမှန် မဆိုမြင့်သောယာဉ်အသွားအလာဧရိယာအဘို့ထိုသူတို့စံပြအောင်,2လက်မစတုရန်းသို့မဟုတ်ချုပ်ကိုင်ဖို့လွယ်ကူဖြစ်ကြောင်း2လက်မပတ်လည် configurations အတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖိုက်ဘာမှန်လှေကားနှင့်အိတ်များထံမှ applications များအမျိုးမျိုးတပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။ ။ Sump အစွမ်းသတ္တိနှင့်မှီခိုနှစ်ပေါင်းများစွာပေး, etc tank, အဆောက်အဦး, အ Piers အိတ်ဆောင်ကိရိယာ, ရန်ညှစ်ထုတ်လိုက်
, ဖန်မျှင်ထည်ပူးတွဲပါနှင့်အညီ, ဖန်မျှင်ထည်ဗီဒီယိုအပိုင်းအစများ: ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျကျွန်ုပ်တို့၏ဖန်မျှင်ထည်ခြစ် attachment များကိုအရေးယူပြီးတော့ကလစ်များ Tags: အထူးအဆိုပါဖန်မျှင်ထည်ခြစ် securefux သို့မဟုတ်အဆိုပါအကူအညီပေးရေးဖွဲ့စည်းပုံဟင်းပွဲများ Add ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေထို့အပြင်သူတို့က။ ။ တွဲသုံးရက်နေ့တွင်, ကုတင်ရန်ကပ်လျက်ခြစ် Panel များအရေးယူကလစ်များ Tags: differential ကို deflecton နဲဖြစ်ပါသည်, အကြောင်း-သွေးဆောင်ဝန် minimize လုပ်ဘယ်ဟာ, Are ။ ထိုအခါအားလုံးသောဖန်မျှင်ထည် attachment များကိုရဲ့အမျိုးအစား 316 သံမဏိကိစ္စတွင်သံမဏိနဲ့လုပ်ထားတဲ့ပြီးတော့ 1- ခုနှစ်တွင်ရရှိနိုင်သော Are, 1-1 /2လက်မ 2- နဲ့အရွယ်အစားနေ။
, ဖန်မျှင်ထည်ဟင်းပွဲ။ ကို non-ကူးမှုမျက်နှာပြင်ပါရှိပါတယ် သူတို့ကိုလမ်းလျှောက်မျက်နှာပြင်တစ်ခုချွေနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံဖြေရှင်းချက်။ caustic နှင့် / သို့မဟုတ်အက်ဆစ်အခြေအနေများခုနှစ်တွင်ဖိုက်ဘာမှန်ပြားတစ်ဦး leve သည်။ သံမဏိကိစ္စတွင်သံမဏိသန်းကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်သောမတူညီသောပြီးတော့နောက်ထပ် Is ဒါကချေး Resistance ၏အဆိုပါဌ။ , ဖန်မျှင်ထည်စာရွက်-သတ္တုတစ်ဦးက Non-grit မျက်နှာပြင်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအတူရရှိနိုင်သော Is သို့မဟုတ်တစ်ဦးက grit မျက်နှာပြင်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအဘယ်မှာရှိ, Anti-စလစ်ဖြတ်ပိုင်းပုံစံအမြတ်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲ, လိုအပ်ပါသည်။ အတူ Add
, ဖန်မျှင်ထည်ဒီအဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအသွင်သဏ္ဌာန်, ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျကျွန်ုပ်တို့၏ဖန်မျှင်ထည်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပုံသဏ္ဍာန်နှင့် Pultruded ဖန်မျှင်ထည် Profiles Are ။ ဖိုက်ဘာမှန်ပေါင်းစပ်နေဖန်ဆင်းတော်နှင့် thermosetting ဗဓေလသစ်စနစ်များ။ အားလုံးပုံစံမျိုးစုံ, Non-သံလိုက်, ကူးမှုအနိမ့်သက်ရောက်မှုကိုခံနိုင်ရည်, အနိမ့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပေါ့ပါးဖြစ်ကြပြီးအများအပြား application များအတွက်တပ်ဆင်ရန်နှင့်စံပြသူတို့ကိုလွယ်ကူသောအောင်ရှုထောင်တည်ငြိမ်မှုရှိသည်။ မိမိစိတ်ကြိုက်ပုံစံမျိုးစုံတောင်းဆိုမှုကိုအပေါ်သို့ရရှိနိုင်ပါသည်။ ။
Composite (GFRP) ခြစ်ဖြစ်ပါသည်: ခေါင်းဆောင်များ GFRP (ထို Glass ကိုတစ်ဦး Fiber စစ်ကူပလတ်စတစ်အမျိုးအစား) ဆိုတာဘာလဲ GFRP ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ•ထိုဓာတုဂုဏ်သတ္တိများ directory ကိုလုပ်ပါပိုကောင်းဖွဲ့စည်းရည်ရွယ်ချက်, Fiber နှင့်အတူအားဖြည့်တစ်ဦးကပေါ်လီမာဘက်ထရီ matrix ကိုအနက်တစ်ဦးကပေါင်းစပ်ပစ္စည်းကို လုပ်. , Is GFRP ထိုသို့သောသတ္တု, Wood ကကဲ့သို့ပင်တစ်ဦးကထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ ။ , ဖန်, ကွန်ကရစ်။ GFRP ပစ္စည်းများရှိပါတယ် အခြားအထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းများဆန့်ကျင်အဖြစ်အရေးကြီးသောအားသာချက်များ, features အသစ်အရသိရသည်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ လိုအပ်ချက်များကို။ GFRP ခြစ်ကဘာလဲ? ပုံသွင်းထား သောဤကုန်ကြမ်းခိုင်မာစေပြီးနောက် GFRP ခြစ် GFRP ခြစ်မှိုထဲကဖိနေကြသည်။ ဖန်ဖိုင်ဘာ, ဗဓေလသစ်နောက်ထပ်နှင့်ခြယ်ပစ္စည်းထားရှိရေး, စိုစွတ်သောအလွှာပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအထူးမှိုထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ ပုံသွင်း GFRP ခြစ်ကြသည်။ အလင်း Anti-တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးမြင့်မားရှိ ဓာတုနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခုခံတွန်းလှန်နဲ့လျှပ်စစ် Non-ကူးမှုအစိတ်အပိုင်းများ: ။ ။ ဗဓေလသစ်, ဖန်ဖိုင်ဘာနောက်ထပ်နှင့်ခြယ်ပစ္စည်းဟာ GFRP ပစ္စည်းများ၏အခြေခံအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ကြသည်ဒါဟာအားဖြင့်လိုအပ်ချက်များအတွက်သင့်လျော်သောမည်သည့်ပစ္စည်းကိုထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ။ ဤအစိတျအပိုငျးပြောင်းလဲနေတဲ့ဗဓေလသစ်: ဓာတုခုခံ ဖြစ်သည်။ GFRP ခြစ်၏, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်ခရမ်းလွန်ခုခံသည့်အစေးကဆုံးဖြတ်ကြသည် resins ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အညီရှေးခယျြခဲ့ကြ၏ယေဘုယျအသုံးပြုမှုများအတွက် orthophthalic စေး, အလွန်လေးလံသောဓါတုများအတွက်ဓာတုပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဗီနိုင်း Ester ဗဓေလသစ်တို့အတွက် isophthalic စေး။ ။ ပတ်ဝန်းကျင် Glass ကို Fiber: Multi-အလွှာ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖန်မျှင်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အသုံးပြုကြသည်ပုံသွင်း GFRP ခြစ်မြင့်မားသောစက်မှု resista ရှိသည်။ ။ ကြောင့်ဖန်ဖိုင်ဘာမှ nce အပိုဆောင်း။ ။ ထိုကဲ့သို့သောခရမ်းလွန်တည်ငြိမ်မှု, မီးလျှံနှောင့်နှေးခြင်းနှင့်အနိမ့်သောမီးခိုးသိပ်သည်းဆနှောင့်နှေးအဖြစ်အပိုဆောင်းစက်မှုနှင့်ဓာတုခုခံတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အသစ်သောသာလွန် features တွေ add ဆေးရောင်စုံစက္ကူ: ။ ခြယ်ပစ္စည်းဟာ GFRP မဆို color ကို gratings ပေးဖို့ဖြစ်နိုင်စေဒါဟာဖြစ်ပျက်စေသည်။ GFRP, အစီရင်ခံဗိသုကာကန့်သတ်စီမံကိန်းများခုနှစ်တွင်ခြစ်ကိုသုံးပါရန်။
ခြစ်အောကျခံခုံ Fibergrate ပုံသွင်း။ လက်ဝါးကပ်တိုင် Brace ကိုရှင်းလင်းရန်အဆိုပါအခြေစိုက်စခန်းအထက်အထပ်ဖိအားပေးရန်နိုင်သလားအတူ Adjustments ခြစ်အောကျခံခုံတို့သည် High Quality Components ဓါတ်လှေကားခြစ် Applications ကိုပံ့ပိုးဖို့ဒီဇိုင်းသူတို့ရဲ့ဖေါ်ပြပေးထားသည့်အကွာအဝေးအတွင်းအပြတ်အသတ် Adjustments, Standard အောကျခံခုံ, ခြစ်ပလက်ဖောင်းများပြီးတော့စိတ်တိုင်းကျအောကျခံခုံဖိအားပေးရန်။ မြင့်။ အောကျခံခုံ “1 များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည် 1-1 / 2,” နှင့်2“နက်ရှိုင်းသောစတုရန်း Fibergrate သို့မဟုတ် Chemgrate ပုံသွင်းဖိုက်ဘာမှန်ခြစ် mesh ။ အောကျခံခုံအကြီးအကဲများအတွက်ကောငျးအလှနျနေကြတယ်” ကြင်ဖော်မဲ့ဦးခေါင်း “နဲ့” ကို quad ဦးခေါင်း “အမြန်လုံခြုံပြီးချွေ installation ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေမည့်ဒီဇိုင်း။ ။ Adjustments •မြင့်မားသောပလက်ဖောင်းများ – Create စွယ်စုံ•ကြမ်းပြင် sloping အပေါ်အဆင့်အထိလမ်းလျှောက်မျက်နှာပြင်များ – အင်း။ အားလုံး Fibergrate နှင့် Chemgrate စတုရန်းကွက်များအတွက် ilable ခြစ်•ကုန်ကျစရိတ်အကျိုးသက်ရောက် – အနိမျ့ installation ကိုကုန်ကျစရိတ်ကိုအလွယ်တကူနဲ့အခြားဒေသများသို့ပြောင်းရွှေ့ပေါ့ပါး• – ရွေ့ပြောင်း, ချိန်ညှိအစိတ်အပိုင်းများကိုပေါ့ပါးဖြစ်ကြပြီးခုခံတွန်းလှန်ဖယ်ရှား•ချေးလျော့ချ – Thermoplastic polyester နှင့် pultruded ဗီနိုင်း Ester အများဆုံးစက်မှုဇုန်စိုစွတ်သောခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်။ -floor Applications ကို
ခြစ်အောကျခံခုံထောက်ပံ့ ဖန်မျှင်ထည်ခြစ်? ခြစ်အောကျခံခုံအချိန်စေရန်အချိန်ကနေထောက်ပံ့ရိုးရာပံ့ပိုးပြီးတော့ဘောင်သွင်းခြင်းနည်းလမ်းများဖြစ်စေအသုံးပြုခြင်းအသုံးအပေါ် Be သို့မဟုတ် Add မဟုတ်နိုင်သလားဘယ်မှာ, အ FRP ခြစ်လူသွားစင်္ကြဒေသများခုနှစ်တွင်ထောက်ပံ့လိုအပ်လိမ့်မည်သည့်အလုပ်အဖွဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရန်မသင့်တော်ပါ Are ။ ဒေသများက Settings, ထိုသို့သောအမျှ။ , ဓာတု Bundeli, မွောကျကြမ်းပြင်ပလက်ဖောင်း & အလုပ်စခန်းများ, ဓာတုကုသမှုထိုးစက်ရုံအခန်း, ရေနုတ်မြောင်းကြမ်းပြင်နှင့်အလုပ်နေရာများအနှံ့မှပေါက်ဖွားလာသူမဟုတ်တဲ့စလစ်နေသောလူသွားလမ်း access ကို, ကြမ်းပြင်ဆန်ခါဆိုင်းငံ့ထား, cable ကိုလှေကားပိုက်အလုပ်နှင့်အောက်လျှပ်စစ်ဝန်ဆောင်မှုများ, မဟုတ်သောဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်ဒေသများဖုံးကွယ်, ပြေး။ လုပ်ဆောင်ရပါမည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ FRPP အောက်ခံပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ထောက်ခံပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ FRP ကြမ်းပြင် grat မြှင့်။ ing, နှင့်ကွက်ပုံစံသို့ link ကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန်ခါ၏။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန်ခါ၏ပြားတူညီသောဧရိယာ၌မျိုးစုံအောကျခံခုံဖျက်သိမ်းရေးတအောက်ခံပေါ်တွင်ပူးပေါင်းနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါကျယ်ပြန့်အခြေစိုက်အောကျခံခုံလိုအပ်လျှင်ကြမ်းပြင်မှ fixed နှင့်လည်းရန်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ 316 ကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန်ခါ၏ထိပ်, အထွဋ်၏အကွာအဝေးအတွက်သာရရှိနိုင်ဒီမြင့်မားသောဝန်ယူနိုငျသောကာအလွန်အစိုင်အခဲအခြေစိုက်စခန်း, ပေးပါသည်။ ကိုက်ညီရန်ကလစ်ပ်ဆင်းကိုင့် / s ကို။ , နှင့်မညီမညာဖြစ်နေသောကြမ်းပြင်ထားရှိရန်လုံးဝချိန်ညှိကျနော်တို့အောက်ခံထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။ ။ သင့်ရဲ့လျှောက်လွှာ suite ဖို့
, လှေခါးထစ်ကိုနင်းနယ် – က FRP, လှေခါးထစ် Solutions Translate , ဖန်မျှင်ထည်, အနင်းလှေကားနှင့်အညီ, လှေကားထစ်အဖုံးပုံသွင်းထားပြီးတော့ Pultruded ခြစ် installation ကိုပုအဖြည့်တစ်ဦးမရှိမဖြစ် Are အဲဒီချေးထိုနင်းတစ်ဦးကသတ်မှတ်ထားသောမြင်နိုင်နှာခေါင်းနှင့်အတူကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဆုံးသောစိန်ခေါ်မှုပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကို Safe ခြေလျင်ပေးနေခုခံတွန်းလှန်ဖြတ်ပိုင်း။ ။ ။ ထိုနင်း, လှေခါးထစ်အဖုံးစတော့အိတ်ခုနှစ်တွင် Precise ဖောက်သည်ဖေါ်ပြပေးထားသည့် SIZE Cut သို့မဟုတ်အလွယ်တကူကွင်းဆင်းထည် Are ဒါက Panel များ Add တင်သွင်းသောနိုင်ပါသည်။
, လှေကားထစ်ကိုနင်းအဖုံး Sotho အဘိဓါန်များကိုတစ်ဦးကအဆင်ပြေ Way ကို Are ။ တည်ဆဲနင်းဘို့အဖုံးစလစ်-ခံနိုင်ရည်ခြေကုပ် နေဆဲဖွဲ့စည်းပုံအသံသည်ဖြစ်ကြောင်း။ လှေခါးထစ်နင်းအဖုံးသစ်သား, ကွန်ကရစ်သို့မဟုတ်သတ္တုနင်းကျော် install လုပ်ထားရလိမ့်မည်။ စံစက်မှုဇုန်အရောင်အလွန်မြင်နိုင်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအဝါရောင်နှာခေါင်းနှင့်ဗိသုကာ application များအတွက်အလင်းမီးခိုးရောင်နှင့်အတူမှောင်မိုက်မီးခိုးရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ သမာဓိ။ အလူမီနီယမ်အောက်ဆိုဒ် grit-ထိပ်တန်းမျက်နှာပြင်လုံခြုံထောက်ပံ့ အများဆုံးလုံခြုံမှုနှင့်အလွန်အကြမ်းခံနင်းဘို့ခြေကုပ်။ သက်တမ်းတစ်ယက်ဖန်ဖျာနှင့်အတူအားဖြည့်ခြင်းနှင့်ခုခံ impact အဲဒီနင်း width မှာလုပ်အတွက်လာဖုံးလွှမ်း။ အဆိုပါစံအထူမိုးသည်းထန်စွာများအတွက်ရရှိနိုင်အမျိုးမျိုးသောအထူအဖုံးများဖြစ်ပါတယ်။ တာဝန် Applications ကို .: နျ Standard Long က Panel များအလွယ်တကူတပ်ဆင်သေတ္တာစဉ်အတွင်း Size ကိုရန် Cut, ဒါမှမဟုတ် Add နစိတ်တိုင်းကျအရှည်ရန် Precut ရရှိနိုင်ပါသည်။
င်း၏နှာခေါင်း: တစ် Fiber စာရွက်-သတ္တု, လှေကားထစ်ကိုနင်းအဖုံးဖူးခက်ချိုမြိန်ခရီးသွားကတောင်မှအဆိုပါပြီးနောက် Glow ရန်လုပ်ပါစေ, နှာခေါင်းဧရိယာသည်, တစ်ဦးကအထူးင်း၏, အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်အတူအမိန့်ရှိနိုင်ပါသည်။ primary light source has been removed. The special nosing is perfect in stairways which serve as emergency exits during powe